စိတျပါတဲ့အခြိနျ - Owl Myanmar News
ဇျောထှနျးနိုငျဆိုတဲ့ကနြျောကအခုတဈ ကောငျကွှကျဖွဈနပွေီ။ငယျငယျကတညျးကအမဆေုံးတယျ။ကြောငျးပွီးတော့အဖဆေုံးပါးသှားပွနျတယျ။လူ့လောကအလယျမှာတဈယောကျတညျးကနျြနတေယျ။ပငျြးရိစရာအရမျးကောငျးတယျ။ဒါတောငျမှအဖကေနစေ ရာအခနျးလေးတခနျးပေးထားခဲ့ပွီးပညာ လေးတတျအောငျကြောငျးထားပေးခဲ့လို့ပါ။တကယျတမျး တဈယောကျတညျးသမားဆိုတာကအကှပျမရှိတဲ့ကွမျး ပရမျးဗတာလို့ပွောပမေယျ့ကနြျောအဲဒီလိုမနခေဲ့ဘူး။ဘာလို့မနတောလဲမေးရငျကနြျောမိမဆုံးမဖမဆုံးမလို့အပွောမခံနိုငျတာ။တကယျစဉျးစားကွညျ့ရငျမိဘမရှိတော့တဲ့ကနြျောကိုအဲဒီလိုပွောရငျမှနျနတောလေ။ဆုံးမပေးမယျ့မိဘမှမရှိတော့တာ။ကနြျောသာဆိုးသှမျးနရေငျကနြေျာ့ဘဝကအခြုပျထဲရောကျရငျလညျးလာထုတျပေးမယျ့သူကမရှိဘူးလေ။အခုတော့ကနြျောလတေမလှနျဘဝရောကျနတေဲ့မိဘတှေ စိတျမပူစရေဖို့ဘဝကိုရိုးရိုးသားသားကွိုးစား ပွီးရပျတညျတယျ။အဖအေမတေို့ဆုံးမခဲ့တဲ့ ရိုးသားမှု့ဂုဏျကတသကျစားမကုနျဆိုတာကို လကျတှကွေုံ့ရတော့တယျ။ကနြျောမှာနေ ထိုငျဖို့အိမျရှိတယျ။အဲဒီအတှကျစိတျမပူရဘူး၊ ဒါပမေယျ့ငှမေရှိဘူး။ကုမ်ပဏီတဈခုမှာအလုပျဝငျရငျးကခငျခငျငွိမျးဆိုတဲ့မိနျးကလေးနှငျ့တှကွေ့တယျ။ခငျခငျငွိမျးကလညျးနယျကပဲအဆောငျမှာနရေငျးအလုပျလာလုပျတာပါ။ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျဖေးမကူညီကွရငျးနီးစပျလာခဲ့တယျ။
ကုမ်ပဏီကCEOကလညျးသဘောကတြယျ။ရိုးသားတဲ့အပွငျလုပျငနျးစီစဉျတာကောငျးမှနျတဲ့အတှကျသူ ဌေးကလညျးခဈြတယျ။အစကတော့ ကနြျောခငျ ခငျငွိမျးအပျေါရိုးရိုးသားသားပဲခငျတယျ။စနောကျတာတော့ရှိတယျ။ခငျငွိမျးလဲဒီလိုပဲနမှောပါ။ဒါပမေယျ့ခငျငွိမျးကကနြေျာ့အတှကျဆိုရငျစတေနာပိုပါတယျ။ယောကျကြားလေးကတဈယောကျတညျးဘဝဆိုတော့ကောငျးကောငျးခကျြမစားနိုငျဖွဈသလိုပဲခကျြပွုတျစားသောကျတတျတာ။သူကတော့သူ့ဘာသာခကျြပွုတျစားတတျတဲ့အတှကျအမွဲပဲကနြေျာ့အတှကျဟငျးပိုထညျ့ခဲ့တယျ။”ခငျငွိမျး ဘာခြ ကျလာသလဲ” ကိုဇျော ကရောဘာခကျြလာသလဲ” “ကွကျဥကွျောပဲ” ထငျသားပဲ” အငျးလငေါလဲဒါပဲခကျြတတျတယျ” လာပါခငျငွိမျးမှာစုံတယျ၊ခငျငွိမျးအပိုခကျြလာတယျ” ဟ့ခငျငွိမျးနငျကကိုဇေျာ့အတှကျပဲခကျြလာသလား၊ငါတို့အတှကျမပါဘူးလား” CEOကလှမျးစတယျ။ “အာဆရာကလညျးဆရာမှာကအစစအရာရာပွညျ့စုံတယျ။
သမီးဟငျးဆရာဘယျစားမလဲ””နငျကမကြှေးခငျြရငျဒီလိုပဲ””မဟုတျပါဘူးဆရာရယျ၊ဆရာစားခငျြတာပွောခငျငွိမျးသခြောခကျြလာပါ့မယျ””ဟားးးဟားးစတာပါခငျငွိမျးရာ၊ကိုဇျောကိုပဲသခြောခကျြကြှေးလိုကျပါ။ဒီကောငျဟငျးကွညျ့လိုကျရငျကွကျဥကွျောပဲ””ဟုတျတယျဆရာရေ” “ကိုဇျော မငျးငါ့ဆီကဟငျးလာယူ၊မငျးအမလဲ မငျးအတှကျပိုထညျ့ပေးလိုကျတယျ””ဟုတျကဲ့ပါဆရာ” “ခငျငွိမျး နငျနှျောငါမပွောမရှိနဲ့၊ကိုဇျောကငါ တှဖေူ့းတဲဝနျထမျးထဲမှာ တျောတဲ့လူထဲပါတယျ” “ဆရာကလညျးမွှောကျနပွေနျပွီ””တကယျပွောတာ ၊ဥက်ကဌကလညျးမငျးကိုမြှေျာ့လငျ့ခကျြထားတယျကှ” “ဆရာရယျ ကတြျောကဘာကောငျမှမဟုတျပါဘူး” “မဟုတျဘူးကိုဇျောမငျးကရိုးသားတယျထကျမွကျတယျ၊ငါတို့ကုမ်ပဏီအတှကျအားကိုးရတယျ””ကြေးဇူးပါဆရာရေ” ကနြျောCEOဆီကဟငျးသှားယူတယျ။သူကလညျးပိုပိုသာသာထညျ့ပေးတယျ။ကနြျောခငျငွိမျးဆီပွနျလာပွီး “ခငျငွိမျးစားတော့မလား””စားမယျလကေိုဇျော” “အငျးစားလေ”ထမငျးဘူးတှကေိုဖှငျ့လိုကျတယျ။ခငျငွိမျးကသူ့ထမငျးခြိုငျ့ထဲကဟငျးကိုကနြေျာ့ကိုအရငျ ဦးခြ ပွီး”ရော့ကိုဇျောစားလေ””စားပါ့မယျခငျငွိမျး “၊ခငျငွိမျးလဲစားလေ”ဟုတျကိုဇျော” ခငျငွိမျးဟာကနြေျာ့အပျေါမှာအကိုကွီးတဈ ယောကျလိုတှယျတာတယျ။ကနြျောလညျး ညီမတဈယောကျလိုခငျတယျ။
ဒီလောကျပဲ လားဆိုတော့လညျးမဟုတျဘူး၊သဘောလညျး ကပြါတယျ။ခငျလေးရုပျက အလှကွီးတော့မဟုတျ ပမေယျ့ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျကမဆိုးဘူး။ ခဈြစရာကောငျးပါတယျ။အနီးကပျမွငျရတဲ့ ကနြျောတဈခါတလလေညျးခငျငွိမျးကိုကွိုကျရငျမဆိုးဘူးလို့တှေးမိတယျ။ခငျလေးဆီကရတဲ့ကိုယျသငျးနံ့လေးတှေ ကွောငျ့တဈခါတဈခါလညျးရငျခုနျတယျ။ကုမ်ပဏီကအကွိုအပို့ရှိတဲ့အတှကျကားနှငျ့အတူပွနျရတယျ။အဲဒီအခါကတြော့လညျးခငျငွိမျးနှငျ့ကနြျောကပျပွီးထိုငျလရှေိ့တယျ။နူးညံ့တဲ့သူ့ပေါငျလုံးအထိအတှကွေ့ောငျ့တဈခါတဈခါလညျး ငပဲကတောငျတယျ။တဖွေးဖွေးနှငျ့ခငျငွိမျးကိုကနြျောကွိုကျလာတယျ။ခငျငွိမျးလဲရိပျမိလာတယျ။ တနတေ့ော့ကနြျောနမေကောငျးတော့ရုံးကိုခှငျ့တိုငျလိုကျတယျ။ဖွဈတဲ့ရောဂါကဆီးနညျးတာကစတာပဲ။ဆီးတစကျထှကျဖို့မကျြရညျကလြောကျအောငျခံစားနရေတယျ။အိမျ သာထဲထိုငျပွီးညညျးရသလိုထလာရငျလညျးတျောတျောခံစားရတာ။ဘယျလိုမှအပွငျမထှကျနိုငျဘူး။တညလုံးအိပျရေးပကျြ။လူလဲနုံးခြိပွီးဖြားနပွေီ။ရအေမြားကွီးသောကျပမေယျ့ဆီးကမသှားဘူးလေ။ရုံးကလညျးစိတျပူကွ တာပေါ့။တကိုယျတညျးဆေးခနျးဘယျလိုသှားမလဲဆိုပွီးတော့လေ။ညနရေောကျတော့ကားရုံးကားနှငျ့ခငျငွိမျးရောကျလာတယျ “ကိုဇျော ကိုဇျော”အခနျးတံခါးခေါကျသံနှငျ့ အတူခငျငွိမျးအသံကွားလိုကျရတယျ။
ကနြျောအိပျရာကထပွီးအားတငျးပွီးတံ ခါးဖှငျ့ပေးပွီး ထိုငျခုံပျေါထိုငျလို ကျတယျ”ဘယျလိုဖွဈတာလဲကိုဇျော””အငျးဆီးလမျးကွောငျးဘာဖွဈလဲမသိပါဘူးခငျငွိမျးရယျ””အမျ”ခငျငွိမျးရှကျသှားတယျ။”ကိုဇျောဆေးခနျးပွရအောငျ””အငျး””အဝတျအစားလဲလိုကျကိုဇျော””အငျး”ကနြျောထိုငျရာကထပွီးလမျးလြောကျမယျလုပျတော့နညျးနညျးယိုငျသှားတယျ။”အို့ ကိုဇျော” ခငျငွိမျးကနြေျာ့ကိုလှမျးဖကျလိုကျပွီးထိနျးတယျ။ကနြျောလညျးခငျလေးပုခုံးလှမျးဆှဲလိုကျပွီး”ရတယျ ခငျငွိမျးရပွီ” “မရဘူးပွနျထိုငျ၊ခငျငွိမျးယူပေးမယျ”ခငျငွိမျးကကနြေျာ့ကိုထိုငျခုံပျေါပွနျထိုငျခိုငျးကာအဝတျဗီဒိုကိုသှားဖှငျ့ပွီး ပုဆိုးနဲ့အကငြ်္ီယူလာတယျ။ကနြျောလညျးလညျးခငျလေးဆီကယူကာအကငြ်္ီအရငျလဲလှယျလိုကျပွီးမတျတပျရပျဖို့ထိုငျခဲုလကျရမျးကိုအားယူကာ ထတယျ ခငျလေးက လာထိနျး တယျ။ပုဆိုးကိုခေါငျးကပဲစှပျခကြာအောကျကပုဆိုးကိုခြှတျခတြယျ။ခငျလေးတဖကျလှညျ့နတေယျ။”ခငျငွိမျးတဈခုလိုသေးတယျ””ဘာလဲကိုဇျော””အတှငျးခံ””အငျးးအငျးဟုတျ”ခငျငွိမျးရှကျရှကျနှငျ့ကတြေျာ့အတှငျးခံဘောငျးဘီသှားယူလာပွီး”ရပွီကိုဇျော”ကနြျောခငျငွိမျးမကျြနှာကွညျ့တော့ မကျြနှာလေးနီရဲနတောပဲဗြာ။ခဈြသူတောငျမထားဖူးတဲ့ခငျလေးကနြေျာ့အတှငျးခံဘောငျးဘီကိုအပြိုလေးတနျမဲ့ယူပေးရရှာတယျလေ။ကနြျောခငျငွိမျးဆီကအတှငျးခံဘောငျးဘီယူပွီးထိုငျခုံပျေါပွနျထိုငျကာခွထေောကျကစှပျတယျ။
ဒူးကြျောသှားမှပွနျရပျရပွနျတယျ။ခငျငွိမျးလညျးပွနျထိနျးရတယျ။ကနြျောပုဆိုးကိုပွနျဖွပွေီးပုဆိုးစကိုပါးစပျနှငျ့ကိုကျ ကာဘောငျးဘီဆှဲတငျရတယျ။ပွီးတော့ပုဆိုးပွနျဝတျပွီး “ရပွီခငျငွိမျး” လာသှားမယျကိုဇျော”ခငျငွိမျးကကနြျောကိုတှဲပွီးအိမျပျေါကနဆေငျးရတယျ။လှကေားရောကျတော့ခငျငွိမျးပုခုံးကိုဖကျပွီးအောကျကိုဆငျးရတယျ။အပွငျရောကျတော့ခငျငွိမျးကားမားကိုလှမျးချေါတယျ။ကားသမား ကကနြေျာ့ကိုတှဲချေါပွီးကားပျေါထိုငျခိုငျးကာကားနှငျ့ဆေးခနျးသှားလိုကျရတယျ။ဆေးခနျးရောကျတော့လူတှကေမြားနတေယျ”ဦးလေးပွနျခငျြရငျပွနျတော့” ခငျငွိမျးကဘယျလိုပွနျမလဲ” သမီးကိုဇျောကို့ Taxiနှငျ့လိုကျပို့ပွီးပွနျမယျ” “အေးသမီးငါဆေးခနျးပွပွီးတဲ့အထိစောငျ့ရငျနောကျတနရောသှားဖို့နောကျကမြှာစိုးလို့နှျော” ရတယျဦးလေးပွနျပွနျ” ခငျငွိမျး ကိုဇေျာ့ကိုကွညျ့ပွီးသနားမိတယျ။ပွုစုစောငျ့ေ ရှာကျမယျ့သူမရှိဘဲနမေကောငျးဖွဈနတော။အပွငျလဲမထှကျနိုငျတော့ဘယျလိုစားသောကျနမေလဲစိုးရိမျလာတယျ။အခုလညျးကွညျ့လလေူတှဲပွီးမှထနိုငျထနိုငျတာ။ကိုဇျောကိုတှဲ ရငျကိုဇျောကလှမျးဖကျထားရငျခငျွငျမျးရငျတှခေုနျနတော။ကိုဇျောကိုသနားစိတျတှဝေငျမိနတေယျ။ဆေးခနျးမှာတဈနာရီလောကျစောငျ့ပွီးမှအထဲဝငျရတယျ။ခငျငွိမျးအထဲထိဝငျကာကိုဇျောကိုလိုကျပို့တယျ။ကုတငျပျေါမှာကိုဇျောကိုလှဲခိုငျးထားလိုကျတယျ။
”ကဲ ခငျမြားယောကျြားဘာဖွဈလာတာ” “ရှငျ “ဆရာဝနျက “ဘာဖွဈလာသလဲမေးတာပါ””ဟို ဟို””ဟောဗြာကိုယျ့ယောကျြားဘာဖွဈမှနျးမသိတာလား” “ဆရာ သူက ကနြော့မိနျးမမဟုတျဘူး၊ကနြော့ ညီမလေးပါ””ဆောရီးဆောရီး၊ဘာဖွဈတာလဲ” “ဆီးသှားမရလို့ပါ””အငျးဆီးသှားတိုငျးလိငျတံတလြောကျ အောငျ့နတောပေါ့””ဟုတျတယျဆရာ””အငျး ဆေးပေးလိုကျမယျ။ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတယျထငျတယျ။ဒါမှမဟုတျရငျကြောကျကပျကွောငျ့လားမသိဘူး၊ဆီးစဈရမယျ””ဟုတျကဲ့ဆရာ””ခငျမြားကွညျ့ရတာအရမျးပငျပနျးနတောဖွဈတာကွာပွီလား””မနကေ့စဖွဈတာ””အငျးအခုဖြားနတောပဲ””ဟုတျကဲ့ဆရာ””အခုဆီးဆေးပေးမယျ၊သောကျလိုကျ ၊ပွီးရငျဆီးနမူနာယူရမယျ။ဟိုဘကျမှာtoilet ရှိတယျ။အဲဒါပေးပွီးရငျသှားလို့ရပွီ””ဟုတျကဲ့ဆရာ” ဆီးမသှားနိုငျပါဘူးဆိုတဲ့လူကိုဆီးစဈခိုငျးနတေယျ။ဒုက်ခပါပဲ”ဆရာဝနျပေးတဲ့ဆေးယူပွီးသောကျတယျ။ပွီးမှအပွငျကိုထှကျပွီးခနနတေယျ။ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျကွာတော့ဆီးသှားခငျြလာပွီ။ဘယျလိုသှားမလဲဗြာ”ကိုဇျော ဆီးသှားခငျြရငျပွောနှျော””သှားခငျြနပွေီခငျငွိမျးကိုအားနာလို့””ရတယျကိုဇျောကနျြးမာရေးကအဓိကပဲလေ” “အငျးလိုကျပို့ပေး”ခငျငွိမျးကိုတှဲပွီးလိုကျပို့ခိုငျးရတယျ။ပွသနာကအဲဒီမှာစတှပွေီ့လနေံရံမှာရှိတဲ့လကျကိုငျတနျးကိုလှမျးကိုငျလိုကျပွီး”ခငျငွိမျးဗူးပေး”ခငျငွိမျးဆီးနမူနာယူမယျ့ဗူးပေးတယျ။
တဖကျကတနျးကိုငျပွီးပုဆိုးကိုမတငျတယျဗူးထဲဆီးသှားမယျလုပျတော့အဆငျမပွေ”ကိုဇျောရလား” အပွငျကနပွေီးခငျငွိမျးမေးတယျ”သှားလို့မရဘူး” “ခငျငွိမျးဘာလုပျပေးရမလဲ””.လီးကိုကိုငျမနိုငျဘူးဖွဈနတေယျ..”ဘယျလိုပွောရမလဲဗြာ”ခငျငွိမျးဝငျခဲ့မယျ” “အဆငျမပွဘေူးမလား””ဟုတျတယျ””ခငျငွိမျးဘယျလိုလုပျပေးရမလဲ””ဗူးထဲထညျ့မရတာခငျငွိမျး””အငျး “ခငျငွိမျး လဲရှကျသှားတယျ။ရှကျရှကျနှငျ့ပဲခငျငွိမျးပွောရတော့တယျ။”ဘယျလိုလုပျပေးရမလဲကိုဇျောခငျငွိမျးလုပျပေးမယျ” “အားနာတယျခငျငွိမျးရယျ၊တနျးမကိုငျရငျလဲမှာ၊ကိုငျတော့လဲဗူးနှငျ့တမေ့ရဘူး၊တပွေီ့းသှားမှရမှာ”အငျးအငျး ခငျငွိမျးလုပျပေးပါ့မယျ့”ခငျငွိမျးကိုဇေျာ့နောကျကနဖေကျပွီးဗူးကိုတဖကျကကိုငျကာကိုဇျောလီးကိုစမျးလိုကျ တယျ။လကျကလညျးတုနျတုနျယငျယငျဖွဈနတေယျ။ကိုငျလိုကျတော့ပြော့ပြော့လေးစမျးပွီးဗူးလေးအဝကိုတတေ့ယျ”တညျ့တညျ့မကဘြူး””ဒုက်ခပါပဲ”ခငျငွိမျးစိတျထဲတှေးရငျးနောကျတော့မထူးဘူးဆိုပွီးကိုဇေျာ့ရှသှေ့ား ကာအသအေခြာကိုငျပွီးတပေ့ေးလိုကျရတယျ။ အရှယျရောကျပွီးသားယောကျကြားလေးတဈယောကျရဲ့လီးကိုခငျငွိမျးအခုမှမွငျဖူးတာ။ခလေးတှနှေငျ့ယှဉျရငျတျောတျောကွီးတယျလို့တှေးမိပွီးစိတျထဲရှကျသလိုကွီးဖွဈသှားမိတယျ၊မွငျဖူးရုံမကအပြိုလေးတနျမဲ့လီးကိုကိုငျပွီးဗူးထဲတပေ့ေးရသေးတယျ။ကနြျောလညျးလီးကိုခငျလေးကိုငျတော့တဈမြိုးခံစားလိုကျရတယျ။
လူရောလီးရောနေ မကောငျးလို့သာလီးကမတောငျတယျ။မဟုတျလို့ကတော့ခငျငွိမျးရဲ့နုးညံ့တဲ့လကျထဲလီးကမွှဟေောကျတကောငျလိုဖွဈနမှောပါ။ဆီးနညျးနညျးသှားလိုကျတယျ။”ရပွီခငျငွိမျး” “ဟုတျကဲ့ “ခငျငွိမျးလသေံတမြိုးဖွဈနမှေနျးသိတယျ။ ကနြျောလညျးဆီးနညျးနညျးသှားတယျ”ရပွီခငျငွိမျးပွီးပွီ” “ဟုတျကိုဇျော”ခငျငွိမျးကနြေျာ့ကိုတှဲပွီးအပွငျပွနျထှကျတယျ။အိမျသာခနျးကတှဲပွီးထှကျလာတော့ဆေးခနျးရှိလူတှကွေညျ့နကွေတယျ၊ခငျငွိမျးတော့ခေါငျးငုံလကျြပဲ။ထိုငျခုံပျေါမှာကနြေျာ့ကိုခထြားပွီးဆီးဗူးသှားပေးကာ။အပွငျဖကျမှာ ကားထှကျငှားတယျ။ပွီးတော့ကနြေျာ့ဆီပွနျလာကာကနြေျာ့ကိုတှဲပွီးကားဆီပွနျသှားကာအိမျပွနျခဲ့ကွတော့တယျ။အိမျရောကျတော့ကနြျောဆီးသှားလိုကျရတဲ့တှကျအဖြားသကျသာလာတယျ”ကိုဇျောသကျသာရဲ့လား””အငျးသကျသာတယျ””ဘာစားမလဲကိုဇျော..ခငျငွိမျးလုပျပေးမယျ” “ရတယျခငျငွိမျး””ဆေးသောကျဖို့တဈခုခုစားရမယျလေ” “အငျး”ကနြေျာ့အပျေါ ကွငျကွငျနာနာလုပျပေးနတေဲ့ ခငျလေးကိုကွညျ့ပွီးကနြျောခဈြမိသှားပွီလေ”ခငျငွိမျး” “ရှငျ””ခငျငွိမျးကိုကနြျောခဈြတယျ””ရှငျ ကိုဇျော’” “ခငျငွိမျးကိုလကျထပျပါရစေ””ကိုဇျောရယျ” “ခငျငွိမျးရောကိုဇေျာ့ကိုခဈြတယျမလား” “အာ…ကိုဇျောကလညျး”ခငျငွိမျးသူ့လကျတှကေိုသာငုံကွညျ့နတေယျကနြျောခငျငွိမျးကိုလှမျးဖကျလိုကျပွီးနဖူးကို နမျးလိုကျတယျ”ဟှနျ့ လူနာနှျော””လူကသာနာတာပါခဈြတာ နှငျမဆိုငျဘူးလေ။
ခဈြတယျမလားခငျငွိမျး””အငျး ခဈြပါသတဲ့ရှငျ”ကနြျောခငျငွိမျးပါးပွငျကိုနရောအနှံ့နမျးလိုကျတော့တယျ။”ဟှနျး အရမျးကဲတယျ””ခဈြလို့ကဲတာပါ” “ခဈ ခဈ ခဈ””ခငျငွိမျး ဒီနမေ့ပွနျနဲ့တော့””အမျ ဘယျလိုဖွဈမလဲ””မောငျ့ကိုပဈထားမှာလားခငျငွိမျး” “မောငျတဲ့လားရှငျ””မောငျလို့ပဲချေါပါအဲဒီအသံလေးကွားခငျြလို့””ဟငျးနှျောတကယျဆို ကိုကိုလို့ပဲချေါရမှာ” “မောငျကအငယျလုပျခငျြလို့ပါ””သှား လူလညျကွီး” “ချေါလမေောငျလို့””အငျးပါမောငျရယျခငျငွိမျးမောငျ့အတှကျစားစရာစီစဉျလိုကျဦးမယျ”ခငျငွိမျးထပွီးစားစရာစီစဉျပေးတယျ။သူစီစဉျပေးတဲ့စားစရာကိုကနြျောကခှံ့ကြှေးခိုငျးတယျ”မောငျကတကယျကလေးလေးလုပျခငျြတာပေါ့” “အငျးလေ လကျထပျပွီးကလေးမယူခငျထိမောငျက ခလေးပဲ””ဟှနျး သိပျဆိုးတဲ့မောငျ” အဲဒီနကေ့ခငျလေးအဆောငျမပွနျပဲကနြျောဆီမှာပဲအိပျလိုကျတယျ။ယူနီဖောငျးခြှတျပွီးကနြေျာ့အဝတျအစားတှလေဲဝတျပွီးနတေယျ။ကနြျောကတော့ဂိနတေဲ့အတှကျဘာမှမလုပျဖွဈပမေယျ့ခငျလေးကိုကနြေျာ့ရငျခှငျမှာပဲထား ကာအတူအိပျလိုကျတယျ။အဖွရေပွီးအတူအိပျနရေပမေယျ့လူနမေကောငျးလီးနမေကောငျးတဲ့အတှကျကနြျောငွိမျနရေတာပါပဲလေ။နောကျန့မနကျခငျငွိမျးရုံးပွနျတကျတယျ။ရုံးကပွနျရငျကနြေျာ့ဆီပဲလာတယျ။သူအဆောငျပွနျသှား တယျ။နောကျရကျရုံးပိတျရကျရတော့ကနြျောနားရတယျ။ရောဂါကပြောကျပွီ။ဒါပမေယျ့ရုံးကနားခိုငျးလို့ရုံးမတကျဖွဈဘူး။လူကရောဂါပြောကျပမေယျ့တဈခုကရောဂါတဈခု ကပိုလာတယျ။ဘာလဲဆိုတော့ကွငျနာယုယခွငျးခံခငျြတဲ့ရောဂါ။တဈယောကျတညျးနပွေီးမှခငျငွိမျးရဲ့အကွငျနာအယုယကွောငျ့ဖွဈလာတဲ့ရောဂါ။
ခငျငွိမျးကိုအရမျးတှခေ့ငျြတယျ။ခငျငွိမျးဆီကိုဖုနျးဆကျလိုကျတယျ”ခငျငွိမျး” “ပွောလေ ကိုဇျော””အာ ဘာကိုဇျောလဲ၊မောငျလို့ချေါလေ” “အာကိုဇျောကလညျးလူတှရှေိတယျ””လကျထပျမယျ့လူတှပေဲကှာ ၊လူတှသေိလပေိုကောငျးလပေေါ့””ခဈ ခဈ ခဈ” “အရမျးပိုတယျနှျော””မပိုပါဘူးခငျငွိမျးရယျမောငျလှမျးလို့” “တျောပွီကှာအလုပျတှရှေိသေးတယျ””ခငျငွိမျးနှျောမောငျ နကေောငျးလားတောငျမမေးဘူး””နကေောငျးသှားပွီပဲကို” “မကောငျးသေးဘူး ပွနျဖွဈနပွေီ””ဟယျတကယျလား” “လိမျစရာလားခငျငွိမျးရာ””အငျးအဲဒါဆိုခငျငွိမျးရုံးဆငျးရငျလာခဲ့မယျ””အငျးမောငျမြှျောနမှော”ခငျငွိမျးကိုလိမျချေါလိုကျတယျ။ခငျငွိမျးညနရေောကျတော့ခငျငွိမျးရောကျလာတယျ။တံခါးထဖှငျ့ပေးပွီးခငျလေးကိုအိပျခနျးထဲချေါခဲ့တယျ “မောငျအပွငျမှာထိုငျမယျလေ””မောငျမထိုငျခငျြဘူးကှာ၊ထိုငျနရောတာညောငျးလာပွီ””အငျးပါမောငျ”ခငျငွိမျးကိုကုတငျပျေါထိုငျခိုငျးပွီးတော့ခငျငွိမျးကိုဖကျကာနမျးလိုကျတယျ။ “နမေကောငျးဘူးဆို””ခငျငွိမျးနဲ့တှတေ့ော့ပြောကျပွီလေ” “ဟှနျးသိပျတတျတယျ””ခဈြလို့ပါခငျငွိမျးရယျ” ပွောရငျးနဲ့ခငျလေးနှုတျခမျးကိုစုပျနမျးလိုကျတယျ “ပွှတျ “”အှနျး အငျးဟငျးးး””မောငျ မဆိုးနဲ့ကှာ” “ဆိုးမှာပဲ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ””အငျးးဟငျးးယားတယျမောငျ” ခငျငွိမျးမှာတပွောရငျးနှငျ့ကိုကနြျောခငျငွိမျးရဲ့လညျတိုငျကြော့ရှငျးရှငျးလေးကိုစုပျယူလိုကျတယျစတစနဲ့နယျကြျောလာတဲ့မောငျ့ကွောငျရငျတှမေောဟိုကျနတေယျ။မောငျကခငျငွိမျး နောကျကြောကိုအသအေခြာပှတျပွီးနမျး နတေော့အနမျးမခံဖူးသေးတဲ့ခငျလေးရငျတှခေုနျပွီးတုနျနတောပေါ့။ကနြျောလညျးတစထကျတစပိုပွီးရဲတငျးလာတယျ။ခငျငွိမျးအကငြ်္ီဇကျကိုအပျေါဆှဲတငျလိုကျပွီးဘရာခြိတျကိုဖွုတျခလြိုကျတယျ”မောငျတျောပွီကှာမဆိုးနဲ့တော့” ခငျငွိမျးအကှင်္ီနောကျကြောကိုအတငျးဖိပွီးတားမွဈတယျ။
“အရမျးခဈြတယျခငျငွိမျးရယျ”ကနြျောခငျငွိမျးကိုအိပျရာပျေါတှနျးလှဲလိုကျပွီးခငျလေးအကငြ်္ီကိုအပျေါတှနျးတငျလိုကျတယျ။ခငျလေးရဲ့နို့စိုငျထှားထှားတှကေလြှံထှကျလာတယျ “အိုးမောငျနှျော”ကနြျောခငျလေးနို့တှကေိုတပွှတျပွှတျစို့လိုကျတယျ။နို့ဝနျးလေးတှကေိုငုံလိုကျပွီးနိုးသီးခေါငျးပွူပွူလေးတှကေိုလြှာနှငျ့ဝိုကျသိမျးလိုကျတဲ့အခါ”ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “”အာ့မောငျနှျောအငျးဟငျးးဟငျးး၊လှတျပါမော ငျရယျ၊မကောငျးပါဘူးကှယျ””မရဘူးကှာဒီနခေ့ဈြမယျခငျငွိမျးအဆောငျမပွနျရတော့ဘူး””မောငျကလညျးကှာ ခငျငွိမျးတို့လကျမှတျမထပျရသေးတဲ့ဟာကို” “မနကျဖွနျရုံးမှာပွောလိုကျမယျ။ဝါမဝငျခငျလကျထပျဖို့စီစဉျလိုကျမယျလေ””အငျးလကျ ထပျပွီးမှလေ””မရဘူးကှာ ဒီနမေ့ောငျနှငျ့အတူနရေမယျ”ခငျငွိမျးမောငျ့ကိုမပွောတော့ပေ။ခငျငွိမျးလညျးမိနျးမသား၊ဆိပျကှယျရာမှာခဈြရသူနှငျ့အတူနမေယျဆိုတဲ့စကားကွားလိုကျတဲ့အခါခငျငွိမျးစိတျတှလေဲယိမျးယိုငျခဲ့တယျ။ရငျတလှပျလှပျခုနျပွီးပိပိမှာစိုလာခဲ့တယျ။မောငျကခငျငွိမျးနို့ကိုတလှညျ့စီစို့ပေးတော့တခကျြတခကျြစိတျက ထိနျးမရအောငျ ဖွဈလာကာမောငျ့ အလိုကြွ ဖဈသှားရပွီ။မဖွဈလို့ခံနိုငျရိုးလားနို့ကိုစို့ပွီးစ ကပျကွားကတလေကျလြှိုသှငျးပွီးခငျငွိမျးရဲ့အဖုတျကိုအတှငျးခံပျေါကပှတျပေးနတေော့ခံလေးစိတျတှထေိနျးမရနိုငျဖွဈသှားရတယျ။ကနြျောခငျငွိမျးနို့တှကေိုတပွှတျပွှတျစို့နသေလိုကနြျောရဲ့ငယျပါကမာပွီးခငျငွိမျးရဲ့ပေါငျကိုထိုး မိနတေယျလေ။ခငျငွိမျးရဲ့ပေါငျကိုလြှာလာထိနတေဲ့မောငျ့ရဲ့လီးကွောငျ့ခငျငွိမျးရဲ့စိတျကိုလာဆှပေးနတေယျ။ခငျငွိမျးမှာတဖွေးဖွေးနှငျ့အဖုတျထဲအရညျတှစေိုရှဲလာပွီလေ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ””အာ့ အငျးဟငျးးဟငျးးးမောငျရယျ” မောငျ့ရဲ့နို့စို့ပွီးလိငျစိတျကိုနှိုးဆှပေးမှု့ကွောငျ့ခငျလေးမှာတဖွေးဖွေးနှငျ့ညညျးတှားမိတယျ။
အတှငျးခံကွားထဲရောကျလာတဲ့လကျကခငျငွိမျးရဲ့အဖုတျအကှဲကွောငျးစမျးပွီးကလျောပေးတော့ခငျလေးရဲ့စောကျစိကာမဖူးလေးကို ထိပေးမှု့ကွောငျ့ခငျငွိမျးမှာစိတျကတဖွေးဖွေးနှငျ့စိတျပါလာပွီးမောငျ့ရဲ့ကွငျနာမှု့ကိုသာလိုခငျြသလိုဖွဈနပွေီ။ ကနြျောလညျးခငျငွိမျးရဲ့အတှငျးခံကိုဆှဲခြှတျလိုကျတော့ခငျငွိမျးလဲသူ့ရဲ့ဖငျကိုကွှပေးတယျ။ကနြျောလညျးခငျငွိမျးရဲ့ပေါငျကွားကိုလှမျးကွညျ့တော့မို့ဖောငျးနတေဲ့ဆီးခုံမို့မို့လေးနှငျ့စကေ့ပျပူးပွီးအရညျတှထှေကျနတေဲ့ပိပိနှုတျခမျးနှဈလှာကိုတှလေို့ကျရတယျ။ကနြျောလညျးစိတျထဲအားမရဖွဈလာပွီမို့ခငျငွိမျးရဲ့အဖုတျကိုလြှာအပွားလိုကျလုပျကာနမျးလိုကျပါတော့တယျ။”အို့ မောငျ အာ့၊မလုပျနဲ့ မောငျ” ကနြျောခငျငွိမျးပွောစကားနားမထောငျပါဘူး လုပျစရာရှိတာဆကျလုပျတယျ။စိတျကလညျးထနျနတော့မို့ခငျငွိမျးရဲ့အဖုတျကိုဖိပွီးနမျးလိုကျတယျခငျငွိမျးအရမျးလနျ့သှားတယျ။ထငျမထားတဲ့မောငျ့ရဲ့အပွုအမူကွောငျ့လေ။အဖုတျထဲတိုးဝငျလာတဲ့မောငျ့ရဲ့လြှာကွီးကွောငျ့တခကျြတှနျ့ကာတားမွဈလိုကျပမေယျ့မောငျကဆကျပွီး ယကျနတောကွောငျ့မောငျ့ဆံပငျကိုကိုငျပွီး “မောငျအဲဒီလိုမလုပျပါနှငျ့မောငျရယျ” “ခငျငွိမျးရရျမောငျ့ကိုခှငျ့ပွုပါကှယျ” “မရဘူးမောငျဖုနျးကံတှနေိမျ့မယျလေ” “ခငျငွိမျးရယျမောငျခငျငွိမျးဟာလေးမှဒီလိုမလုပျပေးရငျခငျငွိမျးလုပျပေးတာမောငျခံစားရတော့မလဲ”:မလုပျနှငျ့တော့လမေောငျ ၊မောငျလုပျစခေငျြရငျခငျငွိမျးလုပျပေးပါ့မယျ” “တကယျလားခငျငွိမျး””တကယျပါမောငျ””အရမျးခဈြတာပဲခငျငွိမျးရယျ””ခငျငွိမျးလညျးမောငျ့ကိုခဈြလို့အရဲစှနျ့လုပျ ပေးတာပါ”ခငျငွိမျးအပျေါတကျပွီးကနြျောခငျငွိမျးနှုတျခမျးကိုနမျးလိုကျတယျ.””ပွှတျ”ခငျငွိမျးလညျးပွနျနမျးလိုကျတယျ။မောငျ့ကိုခငျငွိမျးအဖုတျမယကျစခေငျြဘူး။
မောငျတဈ ယောကျဖုနျးကံနိမျ့မှာမလိုလားဘူးလကေနြျောလညျးခငျငွိမျးကိုနမျးပွီးတော့”ခငျငွိမျး မောငျ့ဟာနမျးပေးပါလား” “နမျးပေးပါ့မယျမောငျ”ကနြျောပကျလကျလှနျအိပျလိုကျတယျ။ခငျငွိမျးလညျးကနြော့ဘေးထထိုငျပွီးကနြေျာ့လီးကိုကိုငျကာနမျးကွညျှပွီးမှစငုံလိုကျတယျ။”ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့ အိုးး အရမျးကောငျးတယျခငျငွိမျးရယျ” ခငျငွိမျးကိုဒီလိုပဲပွောရမှာပဲတကယျကအဲဒီလောကျမကောငျးဘူး၊ခငျငွိမျးက လီးကိုစုပျရုံပဲစုပျတတျတယျ။ “အငျးအငျးးးဟငျးးးးရှီး”းခငျငွိမျးမောငျကအရမျးကောငျးတယျဆိုလို့ကွိုးစားပွီးစုပျနရေတာ။။မောငျ့လီးကဟိုတနကေ့နှငျ့လုံဎဝမတူဘူး၊လီးကအရမျးကွီးလာသလိုပိုလညျးရှညျတယျ။ကိုယျ့အဖုတျတောငျခံနိုငျမလားတှေးမိတယျ။တှေးရငျးနှငျ့ပိပိထဲကအရညျစီးထှကျတယျ။ ခငျငွိမျးရဲ့အာငှနှေ့ငျ့လြှာရဲ့စုပျအားကွောငျှ့ကနြေျာ့လီးကမတရားတောငျလာတယျ။ အကွောတှပြေိုငျးပြိုငျးထနတော။ကနြျောခငျငွိမျးခေါငျးကိုအသာလေးကိုငျပွီးလီးကိုရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျလိုကျတယျ။ခသျငွိမျးလုပျပေးတာနှငျ့အားမရပါဘူး။နောကျမှတဖွေးဖွေးသငျပေးရမှာပါ။လီးလညျးအဆမတနျတောငျနပေါပွီ။ခငျငွိမျးစောာကျဖုတျကိုလကျနှငျ့နှိုကျလိုကျတယျ။စိုရှဲနတေယျ့အဖုတျကိုတှပွေီ့းလိုးရနျဆုံးဖွတျကာ “ခငျငွိမျးမောငျလိုးတော့မယျ””ဟှနျးမောငျနှျောအပွောပကျစကျတယျ””ဟီးခငျငွိမျးကလဲကှာမောငျလိုးခငျြအားကွီးပွီး ပွောမိတာပါ””အငျးပါမောငျ”ခငျငွိမျးကကနြျောလိုးဖို့ရာအိပျလိုကျပွီးပေါငျကားပေးတယျ။ကနြျောလညျးခငျငွိမျးပေါငျကွားဒူးထောကျကာလီးကိုစောကျဖုတျဝတပွေီ့းလိုးလိုကျတယျ”ဗြိ ဗြိ ဗွဈ ဗွဈ “ “အာ့မောငျဖွေးဖွေးကှာအောငျ့တယျ” အဖုတျဝကအရမျးကိုကဉျြးတယျ။
ကနြျောလီးမဆံ့မပွဲတိုးဝငျသှားတဲ့အတှကျခငျငွိမျးလနျ့ဖနျြ့ကာတားလိုကျတာပါ” ကနြျောဆကျပွီးမသှငျးသေးဘဲခငျငွိမျးနို့ကို တပွှတျပွှတျမွညျအောငျကုနျးစို့ကာခငျွငိမျးရဲ့စိုးရိမျစိတျကိုလြှော့ခလြိုကျတယျ။ ခငျငွိမျးလညျးမောငျ့ကိုတားမရဘူးဆိုတာသိတယျလေ။လီးကွီးကခငျငွိမျးအဖုတျထဲတိုးဝငျနတေယျ။ခငျငွိမျးအဖုတျကအတှငျးသားတှလေညျးလှုပျနပွေီးမောငျ့လီးကိုကွောကျကွောကျနဲ့ညှဈမိနတေယျ။မောငျကဆကျမသှငျးသေးပဲနို့တှကေိုတပွှတျပွှတျစို့နပွေနျပွီ။နာကငျြမှု့တှသေကျသာလာပွီးမောငျ့ရဲ့လီးကိုညှဈနတောကိုဖွလြေော့မိ တယျ။ဝဒေနာထကျကာမအရသာထူးကိုတှလေ့ာရတဲ့အတှကျအလိုလိုညညျးမိတယျ။ခငျငွိမျးဖီလျးလငျပွနျရပွီဖွဈတဲ့အတှကျတဝကျတပကျြဝငျနတေဲ့လီးကိုဖွေးညငျးစှာထိုးသှငျးလိုကျတယျ။”ဗဈြ ဗဈြ ဖောကျ “”အာ့ အိုး မောငျ” ကနြျောသိပွီလခေငျငွိမျးရဲ့အပြိုမှေးကိုကနြေျာ့လီးကထိုးခှဲခဲ့ပွီခငျငွိမျးနာသှားမှနျးလဲသိတယျ။ဒီတော့ဆကျမလိုးပဲရပျကာနို့ကိုဆကျစို့ပေးလိုကျတယျ”မောငျရယျအရမျးနာတယျ””ခနဆိုသကျသာသှားမှာပါ”ကနြျောနို့ကိုတပွှတျပွှတျစို့လိုကျတယျ။ခငျငွိမျးသကျသာလောကျပွီဆိုမှ “ခငျငွိမျးမောငျဆကျလုပျမယျနှျော””အငျးပါမောငျ” ကနြျောခါးမတျလိုကျကာခငျငွိမျးခါးကိုလှမျးဆှဲပွီးတခကျြခငျြးအဝငျအထှကျကိုပုံမှနျလေး လုပျလိုကျတယျ။လီးဒဈကခငျငွိမျးအဖုတျကို ပှတျဝငျပှတျထှကျနှငျ့ကွပျတညျးစှာဝငျထှကျနတေယျ။သှေးစသှေးနလေးနညျးနညျးပဲလီးရညျနှငျ့စောကျဖုတျရညျကွားမှာတှရေ့တယျ။ငါးမိနဈလောကျပဲလိုးရသေးတယျ။ခငျငွိမျးညညျးတှားသံထှကျလာတယျ”ဗဈြ ဘှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဘှတျ””အငျးဟငျးးးဟငျးးအငျးးး””ဘှတျ ဖှတျ ဖနျးးဖနျးးးဖနျးးး””အာ့! အငျ့ !အငျးဟငျးးးမောငျရယျ” ခငျငွိမျးညညျးတှားသံနှငျ့အတူ အဖုတျထဲက ညှဈလာတယျ။ခငျငွိအယမျးပွီးတော့မယျဆိုတာကနြျောသိလိုကျတယျ။
ကနြျောလညျးပွီးခငျြနပွေီလေ။ဒီတော့လိုးတဲ့အရှိနျထပျမွှငျ့ကာဆောငျ့လိုကျတယျ “ဘှတျ! ဖှတျ! ဘှတျ ဖနျးးဖနျးးဖနျးး” “အာ့! အီးးရှီးးရှီးးးးအာ့ အငျးဟငျးးအားရှီးးး” ညညျးတှားသံပိုဆူလာပွီးခငျငွိမျးပိပိထဲကညှဈအားလြော့ကာငွိမျကသြှားတော့တယျ။ကနြျောလညျးမာနျတငျးပွီးဆကျလိုးလိုကျတယျ။အခကျြနှဈရာခနျ့ဆောငျ့ပွီးတော့ကနြျောလညျးသုတျတှပေနျးထှကျသှားတော့တယျ “ခငျငွိမျးကောငျးလား””ဟှနျးဘာတှလောမေးနတောလဲ” “ကောငျးလားလို့””မသိဘူး နာနတောပဲ””ဟားးးးး” ကနြျောကခငျငွိမျးပါးပွငျကိုနမျးလိုကျပွီးရယျလိုကျရာ “ဟှနျးသူကတော့ရယျနနေိုငျတယျ၊ဒီမှာတော့ ကြိနျးစပျနပွေီ””ခနနသေကျသာသှားမှာပါ” ထိုညကတဈခြီပဲဆှဲလိုကျတယျ။ခငျငွိမျးအရမျးနာကငျြပွီးကွောကျသှားမှာစိုးလို့ပါ။ ဒီလိုနှငျ့ခငျငွိမျးနှငျ့ကနြျောခွောကျလလောကျရညျးစားဖွဈတယျ။တနင်ျဂနှနေတေို့ငျးလုပျဖွဈတယျ။ခငျငွိမျးကိုလိငျဆကျဆံရာမှာမရှကျဖို့သငျပေးရငျးအဖုတျယကျကိုခှငျ့ပွုစတေယျ။တဖွေးဖွေးနှငျ့ခငျငွိမျးလီးစုပျကြှမျးကငျြလာယုံမကဖငျပါလိုးခံတတျလာတယျ။နောကျတော့ကနြျောတို့လကျထကျဖွဈတယျ။လကျထပျပွီးလေးလလောကျမှာခငျငွိမျးကိုယျဝနျရလာတယျ။ကနြျောလညျးလကျထပျပွီးတော့CEOကိုအလုပျကထှကျခှငျ့တောငျးတဲ့အခါ။CEO က ခှငျ့မပွုဘူး။ဥက်ကဌနှငျ့တိုငျပငျပွီး လုပျငနျးခှဲ တဈခုကိုအပွတျပေးတယျ။ကွိုတငျငှပေါထုတျပေးတဲ့အတှကျကနြေျာ့လုပျငနျးကိုကိုယျတိုငျဦးဆောငျရတယျ။
လုပျငနျးကအောငျမွငျတယျ။လုပျငနျးအပျနှံတဲ့အခါမှာတော့CEOက”ကိုဇျောမငျးစာမေးပှဲအောငျတယျ” ဗြာဘာစာမေးပှဲလဲဆရာ” အခုပေးတဲ့လုပျငနျးကငါတို့ကမငျးကိုပေးတဲ့ငှကေနညျးတယျရှုံးရငျထပျပေးဖို့စီစဉျထားတယျ” “ရပါတယျဆရာကနြျောမွတျပါတယျ” “အေး ဟုတျတယျဥက်ကဌကမငျးအတှကိဆု ကွေးလို့သဘောထားပွီးပေးလိုကျတယျ” “ဗြာ ဆရာ ရပါတယျဆရာမပေးပါနှငျ့” “မငျးရဲ့သမီးလေးအတှကျမှေးနလေ့ကျဆောငျပေးတယျလို့လို့သဘောထားလိုကျ” ကြးဇူးတငျပါတယျဆရာ” ဆုကွေးငှသေိနျးနှဈရာထပျပေးတယျ။ ကနြျောသမီးလေးလူ့လောကထဲရောကျလာတာမင်ျဂလာနှငျ့အတူရောကျလာတယျ။ ကုမ်ပဏီအလုပျအပွငျ အပွငျကအလုပျတှလေကျခံရရှိတယျ။လုံးဝနားခြိနျမရှိဘူးပေါ့။ဒါပမေယျ့ကနြျောပြျောတယျ။နစေရာလုံးခငျြးအိမျအပွငျကားလညျးဝယျလိုကျပွီ။ခငျငွိမျးကလညျး ကနြေျာ့အပျေါအရမျးကောငျးရှာတယျ။စီးတဲ့ရဆေယျတဲ့ကနျသငျးအပွငျကနြျောရဲ့စာရငျးစယားတှအေားလုံးကနြျောစိတျခရြအောငျလုပျပေးတယျ။ဒါကစီးပှားရေး။အိမျထောငျရေးမှာတော့ကနြော့စိတျတိုငျးကဆြောငျရှကျပေးပါတယျ။ကနြျောလညျးဆကျကွိုးစားတယျ။ဒီလိုနှငျ့နောငျထပျလေးနှဈအကွာမှာခငျငွိမျးကိုယျဝနျထပျဆောငျရတယျ။ကနြျောကွောငျ့ပါပဲသမီးလေးအတှကျအဖျောရအောငျနောကျတဈယောကျမှေးပေးဖို့တောငျးဆိုတာပါ။ကနြျောကိုတဈယောကျတညျးမှေးခဲ့တယျ။ဖဖေနှေငျ့မမေဆေုံးတော့ကနြျောကတဈကောငျကွှကျဘဝလေ။
အားပေးကူညီသူမရှိဘူး၊ဒီတော့ဒီဒဏျကိုကနြော့သမီးလေးမခံစားစခေငျြလို့ပါ။ သားလေးနှဈနှဈအရှယျရောကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ခငျငွိမျးတဈယောကျမောနတေတျတယျ။လိငျကိစ်စလုံးဝစိတျမပါတော့ဘူး။”မောတယျမောငျရယျ၊ခငျငွိမျးမခံနိုငျလို့ပါ” ကနြျောလညျးစိတျလြှော့ပွီးလကျသမားလုပျရပွနျတယျ။သူနကေောငျးတဲ့အခါမှာစုပျပေးတတျတယျ။လိုးရငျအဆငျမပွဘေူးတဖွေးဖွေးနှငျ့ခငျငွိမျးနှလုံးအောငျ့လာတယျ။ ခွဆေဈလကျဆဈတှယေောငျလာလို့ကနြျောခငျငွိမျးကိုဆေးစဈတယျ။ခငျငွိမျးနှလုံးရောဂါရနပွေီလေ။ကနြျောအစှမျးကုနျကွိုးစားပွီးဆေးကုတယျ။ခငျငွိမျးရောဂါကမပြောကျတော့ဘူးနာတာရှညျလိုဖွဈနပွေီ။ခငျငွိမျးကိုဆေးကုရငျးသုံနှဈလောကျကွာတယျ။အလုပျကတဖကျလုပျရငျးစိတျလလောတယျ။ကတြျောသာယာမှု့နောကျကိုလိုကျရငျးနှငျ့စိတျဖွတေယျအပွာကားကွညျ့တယျလကျနဲ့ဖွတေယျ။ဒါပမေယျ့လိုအပျတဲ့စိဆန်ဒတှမေပွညျ့ဘူး။ခငျငွိမျးနှငျ့ကနြျောအတူမအိပျဖွဈဘူး။
အိပျရငျလညျးစိတျပါတဲ့အခြိနျလုပျခငျြတယျ။လုပျလို့မရတဲ့အခွအေနမေို့ကနြေျာ့စိတျကိုတငျးနရေတယျ။ဒီလိုနှငျ့ကနြျောအငျတာနကျမှာာဆကျဆီလိုငျးတှေ ရှာပွီးကွညျ့တယျ။အကောငျ့သဈဖှငျ့ပွီးကွညျ့တယျ။ကွညျ့ရုံနှငျ့အားမရဘူး၊လုပျခငျြလာတယျ။တနတေ့ော့ မိနျးကလေးတဈယောကျနှငျှအမှတျမထငျဆုံမိ ရငျးသတိထားမိတယျ။အရမျးခဈြစရာကောငျးတဲ့မိနျးခလေးပါ။ရုပျကလေးကကွှရေုပျလိုကနြျောထကျအသကျကဆယျနှဈလောကျငယျတယျ။သူကဆူပါမတျကကျမှာဈေးရောငျးတယျ။ဝနျထမျးပေါ့ဗြာ။ဈေးသှားဝယျရငျးရငျနီးလာတယျ။တဖွေးဖွေးနှငျ့အမညျကိုသိလာတယျ။ ရုပျကလေးလှသလောကျစှာတယျ။ရညျးစားမြားတယျ။သူ့အမညျသိတော့ကနြျော fbကနကေနြျောသူ့အမညျရှာရငျး လှမျးadd တယျ။သူကလညျးfriendအဖွဈလကျခံတယျ Cbမှာစကားလေးဘာလေးပွောရငျးကပိုပွီးရငျးနီးလာတော့တယျ။သူ့အမညျကတော့ခမျြးမွမေ့တေဲ့…….။
ဇော်ထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့ကျနော်ကအခုတစ် ကောင်ကြွက်ဖြစ်နေပြီ။ငယ်ငယ်ကတည်းကအမေဆုံးတယ်။ကျောင်းပြီးတော့အဖေဆုံးပါးသွားပြန်တယ်။လူ့လောကအလယ်မှာတစ်ယောက်တည်းကျန်နေတယ်။ပျင်းရိစရာအရမ်းကောင်းတယ်။ဒါတောင်မှအဖေကနေစ ရာအခန်းလေးတခန်းပေးထားခဲ့ပြီးပညာ လေးတတ်အောင်ကျောင်းထားပေးခဲ့လို့ပါ။တကယ်တမ်း တစ်ယောက်တည်းသမားဆိုတာကအကွပ်မရှိတဲ့ကြမ်း ပရမ်းဗတာလို့ပြောပေမယ့်ကျနော်အဲဒီလိုမနေခဲ့ဘူး။ဘာလို့မနေတာလဲမေးရင်ကျနော်မိမဆုံးမဖမဆုံးမလို့အပြောမခံနိုင်တာ။တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်မိဘမရှိတော့တဲ့ကျနော်ကိုအဲဒီလိုပြောရင်မှန်နေတာလေ။ဆုံးမပေးမယ့်မိဘမှမရှိတော့တာ။ကျနော်သာဆိုးသွမ်းနေရင်ကျနော့်ဘဝကအချုပ်ထဲရောက်ရင်လည်းလာထုတ်ပေးမယ့်သူကမရှိဘူးလေ။အခုတော့ကျနော်လေတမလွန်ဘဝရောက်နေတဲ့မိဘတွေ စိတ်မပူစေရဖို့ဘဝကိုရိုးရိုးသားသားကြိုးစား ပြီးရပ်တည်တယ်။အဖေအမေတို့ဆုံးမခဲ့တဲ့ ရိုးသားမှု့ဂုဏ်ကတသက်စားမကုန်ဆိုတာကို လက်တွေ့ကြုံရတော့တယ်။ကျနော်မှာနေ ထိုင်ဖို့အိမ်ရှိတယ်။အဲဒီအတွက်စိတ်မပူရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငွေမရှိဘူး။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်ရင်းကခင်ခင်ငြိမ်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးနှင့်တွေ့ကြတယ်။ခင်ခင်ငြိမ်းကလည်းနယ်ကပဲအဆောင်မှာနေရင်းအလုပ်လာလုပ်တာပါ။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဖေးမကူညီကြရင်းနီးစပ်လာခဲ့တယ်။
ကုမ္ပဏီကCEOကလည်းသဘောကျတယ်။ရိုးသားတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းစီစဉ်တာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်သူ ဌေးကလည်းချစ်တယ်။အစကတော့ ကျနော်ခင် ခင်ငြိမ်းအပေါ်ရိုးရိုးသားသားပဲခင်တယ်။စနောက်တာတော့ရှိတယ်။ခင်ငြိမ်းလဲဒီလိုပဲနေမှာပါ။ဒါပေမယ့်ခင်ငြိမ်းကကျနော့်အတွက်ဆိုရင်စေတနာပိုပါတယ်။ယောက်ကျားလေးကတစ်ယောက်တည်းဘဝဆိုတော့ကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ဖြစ်သလိုပဲချက်ပြုတ်စားသောက်တတ်တာ။သူကတော့သူ့ဘာသာချက်ပြုတ်စားတတ်တဲ့အတွက်အမြဲပဲကျနော့်အတွက်ဟင်းပိုထည့်ခဲ့တယ်။”ခင်ငြိမ်း ဘာချ က်လာသလဲ” ကိုဇော် ကရောဘာချက်လာသလဲ” “ကြက်ဥကြော်ပဲ” ထင်သားပဲ” အင်းလေငါလဲဒါပဲချက်တတ်တယ်” လာပါခင်ငြိမ်းမှာစုံတယ်၊ခင်ငြိမ်းအပိုချက်လာတယ်” ဟ့ခင်ငြိမ်းနင်ကကိုဇော့်အတွက်ပဲချက်လာသလား၊ငါတို့အတွက်မပါဘူးလား” CEOကလှမ်းစတယ်။ “အာဆရာကလည်းဆရာမှာကအစစအရာရာပြည့်စုံတယ်။
သမီးဟင်းဆရာဘယ်စားမလဲ””နင်ကမကျွေးချင်ရင်ဒီလိုပဲ””မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်၊ဆရာစားချင်တာပြောခင်ငြိမ်းသေချာချက်လာပါ့မယ်””ဟားးးဟားးစတာပါခင်ငြိမ်းရာ၊ကိုဇော်ကိုပဲသေချာချက်ကျွေးလိုက်ပါ။ဒီကောင်ဟင်းကြည့်လိုက်ရင်ကြက်ဥကြော်ပဲ””ဟုတ်တယ်ဆရာရေ” “ကိုဇော် မင်းငါ့ဆီကဟင်းလာယူ၊မင်းအမလဲ မင်းအတွက်ပိုထည့်ပေးလိုက်တယ်””ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ” “ခင်ငြိမ်း နင်နှော်ငါမပြောမရှိနဲ့၊ကိုဇော်ကငါ တွေ့ဖူးတဲဝန်ထမ်းထဲမှာ တော်တဲ့လူထဲပါတယ်” “ဆရာကလည်းမြှောက်နေပြန်ပြီ””တကယ်ပြောတာ ၊ဥက္ကဌကလည်းမင်းကိုမျှော့်လင့်ချက်ထားတယ်ကွ” “ဆရာရယ် ကျတော်ကဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူး” “မဟုတ်ဘူးကိုဇော်မင်းကရိုးသားတယ်ထက်မြက်တယ်၊ငါတို့ကုမ္ပဏီအတွက်အားကိုးရတယ်””ကျေးဇူးပါဆရာရေ” ကျနော်CEOဆီကဟင်းသွားယူတယ်။သူကလည်းပိုပိုသာသာထည့်ပေးတယ်။ကျနော်ခင်ငြိမ်းဆီပြန်လာပြီး “ခင်ငြိမ်းစားတော့မလား””စားမယ်လေကိုဇော်” “အင်းစားလေ”ထမင်းဘူးတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းကသူ့ထမင်းချိုင့်ထဲကဟင်းကိုကျနော့်ကိုအရင် ဦးချ ပြီး”ရော့ကိုဇော်စားလေ””စားပါ့မယ်ခင်ငြိမ်း “၊ခင်ငြိမ်းလဲစားလေ”ဟုတ်ကိုဇော်” ခင်ငြိမ်းဟာကျနော့်အပေါ်မှာအကိုကြီးတစ် ယောက်လိုတွယ်တာတယ်။ကျနော်လည်း ညီမတစ်ယောက်လိုခင်တယ်။
ဒီလောက်ပဲ လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး၊သဘောလည်း ကျပါတယ်။ခင်လေးရုပ်က အလှကြီးတော့မဟုတ် ပေမယ့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကမဆိုးဘူး။ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။အနီးကပ်မြင်ရတဲ့ ကျနော်တစ်ခါတလေလည်းခင်ငြိမ်းကိုကြိုက်ရင်မဆိုးဘူးလို့တွေးမိတယ်။ခင်လေးဆီကရတဲ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးတွေ ကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလည်းရင်ခုန်တယ်။ကုမ္ပဏီကအကြိုအပို့ရှိတဲ့အတွက်ကားနှင့်အတူပြန်ရတယ်။အဲဒီအခါကျတော့လည်းခင်ငြိမ်းနှင့်ကျနော်ကပ်ပြီးထိုင်လေ့ရှိတယ်။နူးညံ့တဲ့သူ့ပေါင်လုံးအထိအတွေ့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလည်း ငပဲကတောင်တယ်။တဖြေးဖြေးနှင့်ခင်ငြိမ်းကိုကျနော်ကြိုက်လာတယ်။ခင်ငြိမ်းလဲရိပ်မိလာတယ်။ တနေ့တော့ကျနော်နေမကောင်းတော့ရုံးကိုခွင့်တိုင်လိုက်တယ်။ဖြစ်တဲ့ရောဂါကဆီးနည်းတာကစတာပဲ။ဆီးတစက်ထွက်ဖို့မျက်ရည်ကျလောက်အောင်ခံစားနေရတယ်။အိမ် သာထဲထိုင်ပြီးညည်းရသလိုထလာရင်လည်းတော်တော်ခံစားရတာ။ဘယ်လိုမှအပြင်မထွက်နိုင်ဘူး။တညလုံးအိပ်ရေးပျက်။လူလဲနုံးချိပြီးဖျားနေပြီ။ရေအများကြီးသောက်ပေမယ့်ဆီးကမသွားဘူးလေ။ရုံးကလည်းစိတ်ပူကြ တာပေါ့။တကိုယ်တည်းဆေးခန်းဘယ်လိုသွားမလဲဆိုပြီးတော့လေ။ညနေရောက်တော့ကားရုံးကားနှင့်ခင်ငြိမ်းရောက်လာတယ် “ကိုဇော် ကိုဇော်”အခန်းတံခါးခေါက်သံနှင့် အတူခင်ငြိမ်းအသံကြားလိုက်ရတယ်။
ကျနော်အိပ်ရာကထပြီးအားတင်းပြီးတံ ခါးဖွင့်ပေးပြီး ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်လို က်တယ်”ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကိုဇော်””အင်းဆီးလမ်းကြောင်းဘာဖြစ်လဲမသိပါဘူးခင်ငြိမ်းရယ်””အမ်”ခင်ငြိမ်းရှက်သွားတယ်။”ကိုဇော်ဆေးခန်းပြရအောင်””အင်း””အဝတ်အစားလဲလိုက်ကိုဇော်””အင်း”ကျနော်ထိုင်ရာကထပြီးလမ်းလျောက်မယ်လုပ်တော့နည်းနည်းယိုင်သွားတယ်။”အို့ ကိုဇော်” ခင်ငြိမ်းကျနော့်ကိုလှမ်းဖက်လိုက်ပြီးထိန်းတယ်။ကျနော်လည်းခင်လေးပုခုံးလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး”ရတယ် ခင်ငြိမ်းရပြီ” “မရဘူးပြန်ထိုင်၊ခင်ငြိမ်းယူပေးမယ်”ခင်ငြိမ်းကကျနော့်ကိုထိုင်ခုံပေါ်ပြန်ထိုင်ခိုင်းကာအဝတ်ဗီဒိုကိုသွားဖွင့်ပြီး ပုဆိုးနဲ့အင်္ကျီယူလာတယ်။ကျနော်လည်းလည်းခင်လေးဆီကယူကာအင်္ကျီအရင်လဲလှယ်လိုက်ပြီးမတ်တပ်ရပ်ဖို့ထိုင်ခဲုလက်ရမ်းကိုအားယူကာ ထတယ် ခင်လေးက လာထိန်း တယ်။ပုဆိုးကိုခေါင်းကပဲစွပ်ချကာအောက်ကပုဆိုးကိုချွတ်ချတယ်။ခင်လေးတဖက်လှည့်နေတယ်။”ခင်ငြိမ်းတစ်ခုလိုသေးတယ်””ဘာလဲကိုဇော်””အတွင်းခံ””အင်းးအင်းဟုတ်”ခင်ငြိမ်းရှက်ရှက်နှင့်ကျတော့်အတွင်းခံဘောင်းဘီသွားယူလာပြီး”ရပြီကိုဇော်”ကျနော်ခင်ငြိမ်းမျက်နှာကြည့်တော့ မျက်နှာလေးနီရဲနေတာပဲဗျာ။ချစ်သူတောင်မထားဖူးတဲ့ခင်လေးကျနော့်အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုအပျိုလေးတန်မဲ့ယူပေးရရှာတယ်လေ။ကျနော်ခင်ငြိမ်းဆီကအတွင်းခံဘောင်းဘီယူပြီးထိုင်ခုံပေါ်ပြန်ထိုင်ကာခြေထောက်ကစွပ်တယ်။
ဒူးကျော်သွားမှပြန်ရပ်ရပြန်တယ်။ခင်ငြိမ်းလည်းပြန်ထိန်းရတယ်။ကျနော်ပုဆိုးကိုပြန်ဖြေပြီးပုဆိုးစကိုပါးစပ်နှင့်ကိုက် ကာဘောင်းဘီဆွဲတင်ရတယ်။ပြီးတော့ပုဆိုးပြန်ဝတ်ပြီး “ရပြီခင်ငြိမ်း” လာသွားမယ်ကိုဇော်”ခင်ငြိမ်းကကျနော်ကိုတွဲပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းရတယ်။လှေကားရောက်တော့ခင်ငြိမ်းပုခုံးကိုဖက်ပြီးအောက်ကိုဆင်းရတယ်။အပြင်ရောက်တော့ခင်ငြိမ်းကားမားကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ကားသမား ကကျနော့်ကိုတွဲခေါ်ပြီးကားပေါ်ထိုင်ခိုင်းကာကားနှင့်ဆေးခန်းသွားလိုက်ရတယ်။ဆေးခန်းရောက်တော့လူတွေကများနေတယ်”ဦးလေးပြန်ချင်ရင်ပြန်တော့” ခင်ငြိမ်းကဘယ်လိုပြန်မလဲ” သမီးကိုဇော်ကို့ Taxiနှင့်လိုက်ပို့ပြီးပြန်မယ်” “အေးသမီးငါဆေးခန်းပြပြီးတဲ့အထိစောင့်ရင်နောက်တနေရာသွားဖို့နောက်ကျမှာစိုးလို့နှော်” ရတယ်ဦးလေးပြန်ပြန်” ခင်ငြိမ်း ကိုဇော့်ကိုကြည့်ပြီးသနားမိတယ်။ပြုစုစောင့်ေ ရှာက်မယ့်သူမရှိဘဲနေမကောင်းဖြစ်နေတာ။အပြင်လဲမထွက်နိုင်တော့ဘယ်လိုစားသောက်နေမလဲစိုးရိမ်လာတယ်။အခုလည်းကြည့်လေလူတွဲပြီးမှထနိုင်ထနိုင်တာ။ကိုဇော်ကိုတွဲ ရင်ကိုဇော်ကလှမ်းဖက်ထားရင်ခင်င်ြမ်းရင်တွေခုန်နေတာ။ကိုဇော်ကိုသနားစိတ်တွေဝင်မိနေတယ်။ဆေးခန်းမှာတစ်နာရီလောက်စောင့်ပြီးမှအထဲဝင်ရတယ်။ခင်ငြိမ်းအထဲထိဝင်ကာကိုဇော်ကိုလိုက်ပို့တယ်။ကုတင်ပေါ်မှာကိုဇော်ကိုလှဲခိုင်းထားလိုက်တယ်။
”ကဲ ခင်များယောက်ျားဘာဖြစ်လာတာ” “ရှင် “ဆရာဝန်က “ဘာဖြစ်လာသလဲမေးတာပါ””ဟို ဟို””ဟောဗျာကိုယ့်ယောက်ျားဘာဖြစ်မှန်းမသိတာလား” “ဆရာ သူက ကျနော့မိန်းမမဟုတ်ဘူး၊ကျနော့ ညီမလေးပါ””ဆောရီးဆောရီး၊ဘာဖြစ်တာလဲ” “ဆီးသွားမရလို့ပါ””အင်းဆီးသွားတိုင်းလိင်တံတလျောက် အောင့်နေတာပေါ့””ဟုတ်တယ်ဆရာ””အင်း ဆေးပေးလိုက်မယ်။ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တယ်ထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျောက်ကပ်ကြောင့်လားမသိဘူး၊ဆီးစစ်ရမယ်””ဟုတ်ကဲ့ဆရာ””ခင်များကြည့်ရတာအရမ်းပင်ပန်းနေတာဖြစ်တာကြာပြီလား””မနေ့ကစဖြစ်တာ””အင်းအခုဖျားနေတာပဲ””ဟုတ်ကဲ့ဆရာ””အခုဆီးဆေးပေးမယ်၊သောက်လိုက် ၊ပြီးရင်ဆီးနမူနာယူရမယ်။ဟိုဘက်မှာtoilet ရှိတယ်။အဲဒါပေးပြီးရင်သွားလို့ရပြီ””ဟုတ်ကဲ့ဆရာ” ဆီးမသွားနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူကိုဆီးစစ်ခိုင်းနေတယ်။ဒုက္ခပါပဲ”ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးယူပြီးသောက်တယ်။ပြီးမှအပြင်ကိုထွက်ပြီးခနနေတယ်။ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ဆီးသွားချင်လာပြီ။ဘယ်လိုသွားမလဲဗျာ”ကိုဇော် ဆီးသွားချင်ရင်ပြောနှော်””သွားချင်နေပြီခင်ငြိမ်းကိုအားနာလို့””ရတယ်ကိုဇော်ကျန်းမာရေးကအဓိကပဲလေ” “အင်းလိုက်ပို့ပေး”ခင်ငြိမ်းကိုတွဲပြီးလိုက်ပို့ခိုင်းရတယ်။ပြသနာကအဲဒီမှာစတွေ့ပြီလေနံရံမှာရှိတဲ့လက်ကိုင်တန်းကိုလှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး”ခင်ငြိမ်းဗူးပေး”ခင်ငြိမ်းဆီးနမူနာယူမယ့်ဗူးပေးတယ်။
တဖက်ကတန်းကိုင်ပြီးပုဆိုးကိုမတင်တယ်ဗူးထဲဆီးသွားမယ်လုပ်တော့အဆင်မပြေ”ကိုဇော်ရလား” အပြင်ကနေပြီးခင်ငြိမ်းမေးတယ်”သွားလို့မရဘူး” “ခင်ငြိမ်းဘာလုပ်ပေးရမလဲ””.လီးကိုကိုင်​မနိုင်​ဘူးဖြစ်​​နေတယ်​..”ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ”ခင်ငြိမ်းဝင်ခဲ့မယ်” “အဆင်မပြေဘူးမလား””ဟုတ်တယ်””ခင်ငြိမ်းဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ””ဗူးထဲထည့်မရတာခင်ငြိမ်း””အင်း “ခင်ငြိမ်း လဲရှက်သွားတယ်။ရှက်ရှက်နှင့်ပဲခင်ငြိမ်းပြောရတော့တယ်။”ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲကိုဇော်ခင်ငြိမ်းလုပ်ပေးမယ်” “အားနာတယ်ခင်ငြိမ်းရယ်၊တန်းမကိုင်ရင်လဲမှာ၊ကိုင်တော့လဲဗူးနှင့်တေ့မရဘူး၊တေ့ပြီးသွားမှရမှာ”အင်းအင်း ခင်ငြိမ်းလုပ်ပေးပါ့မယ့်”ခင်ငြိမ်းကိုဇော့်နောက်ကနေဖက်ပြီးဗူးကိုတဖက်ကကိုင်ကာကိုဇော်လီးကိုစမ်းလိုက် တယ်။လက်ကလည်းတုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်နေတယ်။ကိုင်လိုက်တော့ပျော့ပျော့လေးစမ်းပြီးဗူးလေးအဝကိုတေ့တယ်”တည့်တည့်မကျဘူး””ဒုက္ခပါပဲ”ခင်ငြိမ်းစိတ်ထဲတွေးရင်းနောက်တော့မထူးဘူးဆိုပြီးကိုဇော့်ရှေ့သွား ကာအသေအချာကိုင်ပြီးတေ့ပေးလိုက်ရတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသားယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့လီးကိုခင်ငြိမ်းအခုမှမြင်ဖူးတာ။ခလေးတွေနှင့်ယှဉ်ရင်တော်တော်ကြီးတယ်လို့တွေးမိပြီးစိတ်ထဲရှက်သလိုကြီးဖြစ်သွားမိတယ်၊မြင်ဖူးရုံမကအပျိုလေးတန်မဲ့လီးကိုကိုင်ပြီးဗူးထဲတေ့ပေးရသေးတယ်။ကျနော်လည်းလီးကိုခင်လေးကိုင်တော့တစ်မျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။
လူရောလီးရောနေ မကောင်းလို့သာလီးကမတောင်တယ်။မဟုတ်လို့ကတော့ခင်ငြိမ်းရဲ့နုးညံ့တဲ့လက်ထဲလီးကမြွေဟောက်တကောင်လိုဖြစ်နေမှာပါ။ဆီးနည်းနည်းသွားလိုက်တယ်။”ရပြီခင်ငြိမ်း” “ဟုတ်ကဲ့ “ခင်ငြိမ်းလေသံတမျိုးဖြစ်နေမှန်းသိတယ်။ ကျနော်လည်းဆီးနည်းနည်းသွားတယ်”ရပြီခင်ငြိမ်းပြီးပြီ” “ဟုတ်ကိုဇော်”ခင်ငြိမ်းကျနော့်ကိုတွဲပြီးအပြင်ပြန်ထွက်တယ်။အိမ်သာခန်းကတွဲပြီးထွက်လာတော့ဆေးခန်းရှိလူတွေကြည့်နေကြတယ်၊ခင်ငြိမ်းတော့ခေါင်းငုံလျက်ပဲ။ထိုင်ခုံပေါ်မှာကျနော့်ကိုချထားပြီးဆီးဗူးသွားပေးကာ။အပြင်ဖက်မှာ ကားထွက်ငှားတယ်။ပြီးတော့ကျနော့်ဆီပြန်လာကာကျနော့်ကိုတွဲပြီးကားဆီပြန်သွားကာအိမ်ပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်။အိမ်ရောက်တော့ကျနော်ဆီးသွားလိုက်ရတဲ့တွက်အဖျားသက်သာလာတယ်”ကိုဇော်သက်သာရဲ့လား””အင်းသက်သာတယ်””ဘာစားမလဲကိုဇော်..ခင်ငြိမ်းလုပ်ပေးမယ်” “ရတယ်ခင်ငြိမ်း””ဆေးသောက်ဖို့တစ်ခုခုစားရမယ်လေ” “အင်း”ကျနော့်အပေါ် ကြင်ကြင်နာနာလုပ်ပေးနေတဲ့ ခင်လေးကိုကြည့်ပြီးကျနော်ချစ်မိသွားပြီလေ”ခင်ငြိမ်း” “ရှင်””ခင်ငြိမ်းကိုကျနော်ချစ်တယ်””ရှင် ကိုဇော်’” “ခင်ငြိမ်းကိုလက်ထပ်ပါရစေ””ကိုဇော်ရယ်” “ခင်ငြိမ်းရောကိုဇော့်ကိုချစ်တယ်မလား” “အာ…ကိုဇော်ကလည်း”ခင်ငြိမ်းသူ့လက်တွေကိုသာငုံကြည့်နေတယ်ကျနော်ခင်ငြိမ်းကိုလှမ်းဖက်လိုက်ပြီးနဖူးကို နမ်းလိုက်တယ်”ဟွန့် လူနာနှော်””လူကသာနာတာပါချစ်တာ နှင်မဆိုင်ဘူးလေ။
ချစ်တယ်မလားခင်ငြိမ်း””အင်း ချစ်ပါသတဲ့ရှင်”ကျနော်ခင်ငြိမ်းပါးပြင်ကိုနေရာအနှံ့နမ်းလိုက်တော့တယ်။”ဟွန်း အရမ်းကဲတယ်””ချစ်လို့ကဲတာပါ” “ခစ် ခစ် ခစ်””ခင်ငြိမ်း ဒီနေ့မပြန်နဲ့တော့””အမ် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ””မောင့်ကိုပစ်ထားမှာလားခင်ငြိမ်း” “မောင်တဲ့လားရှင်””မောင်လို့ပဲခေါ်ပါအဲဒီအသံလေးကြားချင်လို့””ဟင်းနှော်တကယ်ဆို ကိုကိုလို့ပဲခေါ်ရမှာ” “မောင်ကအငယ်လုပ်ချင်လို့ပါ””သွား လူလည်ကြီး” “ခေါ်လေမောင်လို့””အင်းပါမောင်ရယ်ခင်ငြိမ်းမောင့်အတွက်စားစရာစီစဉ်လိုက်ဦးမယ်”ခင်ငြိမ်းထပြီးစားစရာစီစဉ်ပေးတယ်။သူစီစဉ်ပေးတဲ့စားစရာကိုကျနော်ကခွံ့ကျွေးခိုင်းတယ်”မောင်ကတကယ်ကလေးလေးလုပ်ချင်တာပေါ့” “အင်းလေ လက်ထပ်ပြီးကလေးမယူခင်ထိမောင်က ခလေးပဲ””ဟွန်း သိပ်ဆိုးတဲ့မောင်” အဲဒီနေ့ကခင်လေးအဆောင်မပြန်ပဲကျနော်ဆီမှာပဲအိပ်လိုက်တယ်။ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီးကျနော့်အဝတ်အစားတွေလဲဝတ်ပြီးနေတယ်။ကျနော်ကတော့ဂိနေတဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပေမယ့်ခင်လေးကိုကျနော့်ရင်ခွင်မှာပဲထား ကာအတူအိပ်လိုက်တယ်။အဖြေရပြီးအတူအိပ်နေရပေမယ့်လူနေမကောင်းလီးနေမကောင်းတဲ့အတွက်ကျနော်ငြိမ်နေရတာပါပဲလေ။နောက်န့မနက်ခင်ငြိမ်းရုံးပြန်တက်တယ်။ရုံးကပြန်ရင်ကျနော့်ဆီပဲလာတယ်။သူအဆောင်ပြန်သွား တယ်။နောက်ရက်ရုံးပိတ်ရက်ရတော့ကျနော်နားရတယ်။ရောဂါကပျောက်ပြီ။ဒါပေမယ့်ရုံးကနားခိုင်းလို့ရုံးမတက်ဖြစ်ဘူး။လူကရောဂါပျောက်ပေမယ့်တစ်ခုကရောဂါတစ်ခု ကပိုလာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကြင်နာယုယခြင်းခံချင်တဲ့ရောဂါ။တစ်ယောက်တည်းနေပြီးမှခင်ငြိမ်းရဲ့အကြင်နာအယုယကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါ။
ခင်ငြိမ်းကိုအရမ်းတွေ့ချင်တယ်။ခင်ငြိမ်းဆီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်”ခင်ငြိမ်း” “ပြောလေ ကိုဇော်””အာ ဘာကိုဇော်လဲ၊မောင်လို့ခေါ်လေ” “အာကိုဇော်ကလည်းလူတွေရှိတယ်””လက်ထပ်မယ့်လူတွေပဲကွာ ၊လူတွေသိလေပိုကောင်းလေပေါ့””ခစ် ခစ် ခစ်” “အရမ်းပိုတယ်နှော်””မပိုပါဘူးခင်ငြိမ်းရယ်မောင်လွမ်းလို့” “တော်ပြီကွာအလုပ်တွေရှိသေးတယ်””ခင်ငြိမ်းနှော်မောင် နေကောင်းလားတောင်မမေးဘူး””နေကောင်းသွားပြီပဲကို” “မကောင်းသေးဘူး ပြန်ဖြစ်နေပြီ””ဟယ်တကယ်လား” “လိမ်စရာလားခင်ငြိမ်းရာ””အင်းအဲဒါဆိုခင်ငြိမ်းရုံးဆင်းရင်လာခဲ့မယ်””အင်းမောင်မျှော်နေမှာ”ခင်ငြိမ်းကိုလိမ်ခေါ်လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းညနေရောက်တော့ခင်ငြိမ်းရောက်လာတယ်။တံခါးထဖွင့်ပေးပြီးခင်လေးကိုအိပ်ခန်းထဲခေါ်ခဲ့တယ် “မောင်အပြင်မှာထိုင်မယ်လေ””မောင်မထိုင်ချင်ဘူးကွာ၊ထိုင်နေရာတာညောင်းလာပြီ””အင်းပါမောင်”ခင်ငြိမ်းကိုကုတင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ခင်ငြိမ်းကိုဖက်ကာနမ်းလိုက်တယ်။ “နေမကောင်းဘူးဆို””ခင်ငြိမ်းနဲ့တွေ့တော့ပျောက်ပြီလေ” “ဟွန်းသိပ်တတ်တယ်””ချစ်လို့ပါခင်ငြိမ်းရယ်” ပြောရင်းနဲ့ခင်လေးနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်တယ် “ပြွတ် “”အွန်း အင်းဟင်းးး””မောင် မဆိုးနဲ့ကွာ” “ဆိုးမှာပဲ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်””အင်းးဟင်းးယားတယ်မောင်” ခင်ငြိမ်းမှာတပြောရင်းနှင့်ကိုကျနော်ခင်ငြိမ်းရဲ့လည်တိုင်ကျော့ရှင်းရှင်းလေးကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်စတစနဲ့နယ်ကျော်လာတဲ့မောင့်ကြောင်ရင်တွေမောဟိုက်နေတယ်။မောင်ကခင်ငြိမ်း နောက်ကျောကိုအသေအချာပွတ်ပြီးနမ်း နေတော့အနမ်းမခံဖူးသေးတဲ့ခင်လေးရင်တွေခုန်ပြီးတုန်နေတာပေါ့။ကျနော်လည်းတစထက်တစပိုပြီးရဲတင်းလာတယ်။ခင်ငြိမ်းအင်္ကျီဇက်ကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးဘရာချိတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်”မောင်တော်ပြီကွာမဆိုးနဲ့တော့” ခင်ငြိမ်းအကှင်္ီနောက်ကျောကိုအတင်းဖိပြီးတားမြစ်တယ်။
“အရမ်းချစ်တယ်ခင်ငြိမ်းရယ်”ကျနော်ခင်ငြိမ်းကိုအိပ်ရာပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ပြီးခင်လေးအင်္ကျီကိုအပေါ်တွန်းတင်လိုက်တယ်။ခင်လေးရဲ့နို့စိုင်ထွားထွားတွေကလျှံထွက်လာတယ် “အိုးမောင်နှော်”ကျနော်ခင်လေးနို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်တယ်။နို့ဝန်းလေးတွေကိုငုံလိုက်ပြီးနိုးသီးခေါင်းပြူပြူလေးတွေကိုလျှာနှင့်ဝိုက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါ”ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “”အာ့မောင်နှော်အင်းဟင်းးဟင်းး၊လွှတ်ပါမော င်ရယ်၊မကောင်းပါဘူးကွယ်””မရဘူးကွာဒီနေ့ချစ်မယ်ခင်ငြိမ်းအဆောင်မပြန်ရတော့ဘူး””မောင်ကလည်းကွာ ခင်ငြိမ်းတို့လက်မှတ်မထပ်ရသေးတဲ့ဟာကို” “မနက်ဖြန်ရုံးမှာပြောလိုက်မယ်။ဝါမဝင်ခင်လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်မယ်လေ””အင်းလက် ထပ်ပြီးမှလေ””မရဘူးကွာ ဒီနေ့မောင်နှင့်အတူနေရမယ်”ခင်ငြိမ်းမောင့်ကိုမပြောတော့ပေ။ခင်ငြိမ်းလည်းမိန်းမသား၊ဆိပ်ကွယ်ရာမှာချစ်ရသူနှင့်အတူနေမယ်ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တဲ့အခါခင်ငြိမ်းစိတ်တွေလဲယိမ်းယိုင်ခဲ့တယ်။ရင်တလှပ်လှပ်ခုန်ပြီးပိပိမှာစိုလာခဲ့တယ်။မောင်ကခင်ငြိမ်းနို့ကိုတလှည့်စီစို့ပေးတော့တချက်တချက်စိတ်က ထိန်းမရအောင် ဖြစ်လာကာမောင့် အလိုကျြ ဖစ်သွားရပြီ။မဖြစ်လို့ခံနိုင်ရိုးလားနို့ကိုစို့ပြီးစ ကပ်ကြားကတေလက်လျှိုသွင်းပြီးခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်ကိုအတွင်းခံပေါ်ကပွတ်ပေးနေတော့ခံလေးစိတ်တွေထိန်းမရနိုင်ဖြစ်သွားရတယ်။ကျနော်ခင်ငြိမ်းနို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့နေသလိုကျနော်ရဲ့ငယ်ပါကမာပြီးခင်ငြိမ်းရဲ့ပေါင်ကိုထိုး မိနေတယ်လေ။ခင်ငြိမ်းရဲ့ပေါင်ကိုလျှာလာထိနေတဲ့မောင့်ရဲ့လီးကြောင့်ခင်ငြိမ်းရဲ့စိတ်ကိုလာဆွပေးနေတယ်။ခင်ငြိမ်းမှာတဖြေးဖြေးနှင့်အဖုတ်ထဲအရည်တွေစိုရွှဲလာပြီလေ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်””အာ့ အင်းဟင်းးဟင်းးးမောင်ရယ်” မောင့်ရဲ့နို့စို့ပြီးလိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးမှု့ကြောင့်ခင်လေးမှာတဖြေးဖြေးနှင့်ညည်းတွားမိတယ်။
အတွင်းခံကြားထဲရောက်လာတဲ့လက်ကခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းစမ်းပြီးကလော်ပေးတော့ခင်လေးရဲ့စောက်စိကာမဖူးလေးကို ထိပေးမှု့ကြောင့်ခင်ငြိမ်းမှာစိတ်ကတဖြေးဖြေးနှင့်စိတ်ပါလာပြီးမောင့်ရဲ့ကြင်နာမှု့ကိုသာလိုချင်သလိုဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းရဲ့အတွင်းခံကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့ခင်ငြိမ်းလဲသူ့ရဲ့ဖင်ကိုကြွပေးတယ်။ကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းရဲ့ပေါင်ကြားကိုလှမ်းကြည့်တော့မို့ဖောင်းနေတဲ့ဆီးခုံမို့မို့လေးနှင့်စေ့ကပ်ပူးပြီးအရည်တွေထွက်နေတဲ့ပိပိနှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျနော်လည်းစိတ်ထဲအားမရဖြစ်လာပြီမို့ခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်ကိုလျှာအပြားလိုက်လုပ်ကာနမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။”အို့ မောင် အာ့၊မလုပ်နဲ့ မောင်” ကျနော်ခင်ငြိမ်းပြောစကားနားမထောင်ပါဘူး လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်တယ်။စိတ်ကလည်းထန်နေတာ့မို့ခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်ကိုဖိပြီးနမ်းလိုက်တယ်ခင်ငြိမ်းအရမ်းလန့်သွားတယ်။ထင်မထားတဲ့မောင့်ရဲ့အပြုအမူကြောင့်လေ။အဖုတ်ထဲတိုးဝင်လာတဲ့မောင့်ရဲ့လျှာကြီးကြောင့်တချက်တွန့်ကာတားမြစ်လိုက်ပေမယ့်မောင်ကဆက်ပြီး ယက်နေတာကြောင့်မောင့်ဆံပင်ကိုကိုင်ပြီး “မောင်အဲဒီလိုမလုပ်ပါနှင့်မောင်ရယ်” “ခင်ငြိမ်းရရ်မောင့်ကိုခွင့်ပြုပါကွယ်” “မရဘူးမောင်ဖုန်းကံတွေနိမ့်မယ်လေ” “ခင်ငြိမ်းရယ်မောင်ခင်ငြိမ်းဟာလေးမှဒီလိုမလုပ်ပေးရင်ခင်ငြိမ်းလုပ်ပေးတာမောင်ခံစားရတော့မလဲ”:မလုပ်နှင့်တော့လေမောင် ၊မောင်လုပ်စေချင်ရင်ခင်ငြိမ်းလုပ်ပေးပါ့မယ်” “တကယ်လားခင်ငြိမ်း””တကယ်ပါမောင်””အရမ်းချစ်တာပဲခင်ငြိမ်းရယ်””ခင်ငြိမ်းလည်းမောင့်ကိုချစ်လို့အရဲစွန့်လုပ် ပေးတာပါ”ခင်ငြိမ်းအပေါ်တက်ပြီးကျနော်ခင်ငြိမ်းနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တယ်.””ပြွတ်”ခင်ငြိမ်းလည်းပြန်နမ်းလိုက်တယ်။မောင့်ကိုခင်ငြိမ်းအဖုတ်မယက်စေချင်ဘူး။
မောင်တစ် ယောက်ဖုန်းကံနိမ့်မှာမလိုလားဘူးလေကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းကိုနမ်းပြီးတော့”ခင်ငြိမ်း မောင့်ဟာနမ်းပေးပါလား” “နမ်းပေးပါ့မယ်မောင်”ကျနော်ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းလည်းကျနော့ဘေးထထိုင်ပြီးကျနော့်လီးကိုကိုင်ကာနမ်းကြည်ွပြီးမှစငုံလိုက်တယ်။”ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ အိုးး အရမ်းကောင်းတယ်ခင်ငြိမ်းရယ်” ခင်ငြိမ်းကိုဒီလိုပဲပြောရမှာပဲတကယ်ကအဲဒီလောက်မကောင်းဘူး၊ခင်ငြိမ်းက လီးကိုစုပ်ရုံပဲစုပ်တတ်တယ်။ “အင်းအင်းးးဟင်းးးးရှီး”းခင်ငြိမ်းမောင်ကအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ကြိုးစားပြီးစုပ်နေရတာ။။မောင့်လီးကဟိုတနေ့ကနှင့်လုံဎဝမတူဘူး၊လီးကအရမ်းကြီးလာသလိုပိုလည်းရှည်တယ်။ကိုယ့်အဖုတ်တောင်ခံနိုင်မလားတွေးမိတယ်။တွေးရင်းနှင့်ပိပိထဲကအရည်စီးထွက်တယ်။ ခင်ငြိမ်းရဲ့အာငွေ့နှင့်လျှာရဲ့စုပ်အားကြောင်ွ့ ကျနော့်လီးကမတရားတောင်လာတယ်။ အကြောတွေပျိုင်းပျိုင်းထနေတာ။ကျနော်ခင်ငြိမ်းခေါင်းကိုအသာလေးကိုင်ပြီးလီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ခသ်ငြိမ်းလုပ်ပေးတာနှင့်အားမရပါဘူး။နောက်မှတဖြေးဖြေးသင်ပေးရမှာပါ။လီးလည်းအဆမတန်တောင်နေပါပြီ။ခင်ငြိမ်းစောာက်ဖုတ်ကိုလက်နှင့်နှိုက်လိုက်တယ်။စိုရွှဲနေတယ့်အဖုတ်ကိုတွေ့ပြီးလိုးရန်ဆုံးဖြတ်ကာ “ခင်ငြိမ်းမောင်လိုးတော့မယ်””ဟွန်းမောင်နှော်အပြောပက်စက်တယ်””ဟီးခင်ငြိမ်းကလဲကွာမောင်လိုးချင်အားကြီးပြီး ပြောမိတာပါ””အင်းပါမောင်”ခင်ငြိမ်းကကျနော်လိုးဖို့ရာအိပ်လိုက်ပြီးပေါင်ကားပေးတယ်။ကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းပေါင်ကြားဒူးထောက်ကာလီးကိုစောက်ဖုတ်ဝတေ့ပြီးလိုးလိုက်တယ်”ဗျိ ဗျိ ဗြစ် ဗြစ် “ “အာ့မောင်ဖြေးဖြေးကွာအောင့်တယ်” အဖုတ်ဝကအရမ်းကိုကျဉ်းတယ်။
ကျနော်လီးမဆံ့မပြဲတိုးဝင်သွားတဲ့အတွက်ခင်ငြိမ်းလန့်ဖျန့်ကာတားလိုက်တာပါ” ကျနော်ဆက်ပြီးမသွင်းသေးဘဲခင်ငြိမ်းနို့ကို တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်ကုန်းစို့ကာခင်ငြ်ိမ်းရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။ ခင်ငြိမ်းလည်းမောင့်ကိုတားမရဘူးဆိုတာသိတယ်လေ။လီးကြီးကခင်ငြိမ်းအဖုတ်ထဲတိုးဝင်နေတယ်။ခင်ငြိမ်းအဖုတ်ကအတွင်းသားတွေလည်းလှုပ်နေပြီးမောင့်လီးကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ညှစ်မိနေတယ်။မောင်ကဆက်မသွင်းသေးပဲနို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့နေပြန်ပြီ။နာကျင်မှု့တွေသက်သာလာပြီးမောင့်ရဲ့လီးကိုညှစ်နေတာကိုဖြေလျော့မိ တယ်။ဝေဒနာထက်ကာမအရသာထူးကိုတွေ့လာရတဲ့အတွက်အလိုလိုညည်းမိတယ်။ခင်ငြိမ်းဖီလ်းလင်ပြန်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တဝက်တပျက်ဝင်နေတဲ့လီးကိုဖြေးညင်းစွာထိုးသွင်းလိုက်တယ်။”ဗျစ် ဗျစ် ဖောက် “”အာ့ အိုး မောင်” ကျနော်သိပြီလေခင်ငြိမ်းရဲ့အပျိုမှေးကိုကျနော့်လီးကထိုးခွဲခဲ့ပြီခင်ငြိမ်းနာသွားမှန်းလဲသိတယ်။ဒီတော့ဆက်မလိုးပဲရပ်ကာနို့ကိုဆက်စို့ပေးလိုက်တယ်”မောင်ရယ်အရမ်းနာတယ်””ခနဆိုသက်သာသွားမှာပါ”ကျနော်နို့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းသက်သာလောက်ပြီဆိုမှ “ခင်ငြိမ်းမောင်ဆက်လုပ်မယ်နှော်””အင်းပါမောင်” ကျနော်ခါးမတ်လိုက်ကာခင်ငြိမ်းခါးကိုလှမ်းဆွဲပြီးတချက်ချင်းအဝင်အထွက်ကိုပုံမှန်လေး လုပ်လိုက်တယ်။လီးဒစ်ကခင်ငြိမ်းအဖုတ်ကို ပွတ်ဝင်ပွတ်ထွက်နှင့်ကြပ်တည်းစွာဝင်ထွက်နေတယ်။သွေးစသွေးနလေးနည်းနည်းပဲလီးရည်နှင့်စောက်ဖုတ်ရည်ကြားမှာတွေ့ရတယ်။ငါးမိနစ်လောက်ပဲလိုးရသေးတယ်။ခင်ငြိမ်းညည်းတွားသံထွက်လာတယ်”ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဘွတ်””အင်းဟင်းးးဟင်းးအင်းးး””ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးးဖန်းးး””အာ့! အင့် !အင်းဟင်းးးမောင်ရယ်” ခင်ငြိမ်းညည်းတွားသံနှင့်အတူ အဖုတ်ထဲက ညှစ်လာတယ်။ခင်ငြိအယမ်းပြီးတော့မယ်ဆိုတာကျနော်သိလိုက်တယ်။
ကျနော်လည်းပြီးချင်နေပြီလေ။ဒီတော့လိုးတဲ့အရှိန်ထပ်မြှင့်ကာဆောင့်လိုက်တယ် “ဘွတ်! ဖွတ်! ဘွတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်းး” “အာ့! အီးးရှီးးရှီးးးးအာ့ အင်းဟင်းးအားရှီးးး” ညည်းတွားသံပိုဆူလာပြီးခင်ငြိမ်းပိပိထဲကညှစ်အားလျော့ကာငြိမ်ကျသွားတော့တယ်။ကျနော်လည်းမာန်တင်းပြီးဆက်လိုးလိုက်တယ်။အချက်နှစ်ရာခန့်ဆောင့်ပြီးတော့ကျနော်လည်းသုတ်တွေပန်းထွက်သွားတော့တယ် “ခင်ငြိမ်းကောင်းလား””ဟွန်းဘာတွေလာမေးနေတာလဲ” “ကောင်းလားလို့””မသိဘူး နာနေတာပဲ””ဟားးးးး” ကျနော်ကခင်ငြိမ်းပါးပြင်ကိုနမ်းလိုက်ပြီးရယ်လိုက်ရာ “ဟွန်းသူကတော့ရယ်နေနိုင်တယ်၊ဒီမှာတော့ ကျိန်းစပ်နေပြီ””ခနနေသက်သာသွားမှာပါ” ထိုညကတစ်ချီပဲဆွဲလိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းအရမ်းနာကျင်ပြီးကြောက်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ ဒီလိုနှင့်ခင်ငြိမ်းနှင့်ကျနော်ခြောက်လလောက်ရည်းစားဖြစ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလုပ်ဖြစ်တယ်။ခင်ငြိမ်းကိုလိင်ဆက်ဆံရာမှာမရှက်ဖို့သင်ပေးရင်းအဖုတ်ယက်ကိုခွင့်ပြုစေတယ်။တဖြေးဖြေးနှင့်ခင်ငြိမ်းလီးစုပ်ကျွမ်းကျင်လာယုံမကဖင်ပါလိုးခံတတ်လာတယ်။နောက်တော့ကျနော်တို့လက်ထက်ဖြစ်တယ်။လက်ထပ်ပြီးလေးလလောက်မှာခင်ငြိမ်းကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။ကျနော်လည်းလက်ထပ်ပြီးတော့CEOကိုအလုပ်ကထွက်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ။CEO က ခွင့်မပြုဘူး။ဥက္ကဌနှင့်တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုကိုအပြတ်ပေးတယ်။ကြိုတင်ငွေပါထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျနော့်လုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ရတယ်။
လုပ်ငန်းကအောင်မြင်တယ်။လုပ်ငန်းအပ်နှံတဲ့အခါမှာတော့CEOက”ကိုဇော်မင်းစာမေးပွဲအောင်တယ်” ဗျာဘာစာမေးပွဲလဲဆရာ” အခုပေးတဲ့လုပ်ငန်းကငါတို့ကမင်းကိုပေးတဲ့ငွေကနည်းတယ်ရှုံးရင်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်” “ရပါတယ်ဆရာကျနော်မြတ်ပါတယ်” “အေး ဟုတ်တယ်ဥက္ကဌကမင်းအတွကိဆု ကြေးလို့သဘောထားပြီးပေးလိုက်တယ်” “ဗျာ ဆရာ ရပါတယ်ဆရာမပေးပါနှင့်” “မင်းရဲ့သမီးလေးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့လို့သဘောထားလိုက်” ကျးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ” ဆုကြေးငွေသိန်းနှစ်ရာထပ်ပေးတယ်။ ကျနော်သမီးလေးလူ့လောကထဲရောက်လာတာမင်္ဂလာနှင့်အတူရောက်လာတယ်။ ကုမ္ပဏီအလုပ်အပြင် အပြင်ကအလုပ်တွေလက်ခံရရှိတယ်။လုံးဝနားချိန်မရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမယ့်ကျနော်ပျော်တယ်။နေစရာလုံးချင်းအိမ်အပြင်ကားလည်းဝယ်လိုက်ပြီ။ခင်ငြိမ်းကလည်း ကျနော့်အပေါ်အရမ်းကောင်းရှာတယ်။စီးတဲ့ရေဆယ်တဲ့ကန်သင်းအပြင်ကျနော်ရဲ့စာရင်းစယားတွေအားလုံးကျနော်စိတ်ချရအောင်လုပ်ပေးတယ်။ဒါကစီးပွားရေး။အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ကျနော့စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ကျနော်လည်းဆက်ကြိုးစားတယ်။ဒီလိုနှင့်နောင်ထပ်လေးနှစ်အကြာမှာခင်ငြိမ်းကိုယ်ဝန်ထပ်ဆောင်ရတယ်။ကျနော်ကြောင့်ပါပဲသမီးလေးအတွက်အဖော်ရအောင်နောက်တစ်ယောက်မွေးပေးဖို့တောင်းဆိုတာပါ။ကျနော်ကိုတစ်ယောက်တည်းမွေးခဲ့တယ်။ဖေဖေနှင့်မေမေဆုံးတော့ကျနော်ကတစ်ကောင်ကြွက်ဘဝလေ။
အားပေးကူညီသူမရှိဘူး၊ဒီတော့ဒီဒဏ်ကိုကျနော့သမီးလေးမခံစားစေချင်လို့ပါ။ သားလေးနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခင်ငြိမ်းတစ်ယောက်မောနေတတ်တယ်။လိင်ကိစ္စလုံးဝစိတ်မပါတော့ဘူး။”မောတယ်မောင်ရယ်၊ခင်ငြိမ်းမခံနိုင်လို့ပါ” ကျနော်လည်းစိတ်လျှော့ပြီးလက်သမားလုပ်ရပြန်တယ်။သူနေကောင်းတဲ့အခါမှာစုပ်ပေးတတ်တယ်။လိုးရင်အဆင်မပြေဘူးတဖြေးဖြေးနှင့်ခင်ငြိမ်းနှလုံးအောင့်လာတယ်။ ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေယောင်လာလို့ကျနော်ခင်ငြိမ်းကိုဆေးစစ်တယ်။ခင်ငြိမ်းနှလုံးရောဂါရနေပြီလေ။ကျနော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးဆေးကုတယ်။ခင်ငြိမ်းရောဂါကမပျောက်တော့ဘူးနာတာရှည်လိုဖြစ်နေပြီ။ခင်ငြိမ်းကိုဆေးကုရင်းသုံနှစ်လောက်ကြာတယ်။အလုပ်ကတဖက်လုပ်ရင်းစိတ်လေလာတယ်။ကျတော်သာယာမှု့နောက်ကိုလိုက်ရင်းနှင့်စိတ်ဖြေတယ်အပြာကားကြည့်တယ်လက်နဲ့ဖြေတယ်။ဒါပေမယ့်လိုအပ်တဲ့စိဆန္ဒတွေမပြည့်ဘူး။ခင်ငြိမ်းနှင့်ကျနော်အတူမအိပ်ဖြစ်ဘူး။
အိပ်ရင်လည်းစိတ်ပါတဲ့အချိန်လုပ်ချင်တယ်။လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမို့ကျနော့်စိတ်ကိုတင်းနေရတယ်။ဒီလိုနှင့်ကျနော်အင်တာနက်မှာာဆက်ဆီလိုင်းတွေ ရှာပြီးကြည့်တယ်။အကောင့်သစ်ဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်။ကြည့်ရုံနှင့်အားမရဘူး၊လုပ်ချင်လာတယ်။တနေ့တော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင်ွအမှတ်မထင်ဆုံမိ ရင်းသတိထားမိတယ်။အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းခလေးပါ။ရုပ်ကလေးကကြွေရုပ်လိုကျနော်ထက်အသက်ကဆယ်နှစ်လောက်ငယ်တယ်။သူကဆူပါမတ်ကက်မှာဈေးရောင်းတယ်။ဝန်ထမ်းပေါ့ဗျာ။ဈေးသွားဝယ်ရင်းရင်နီးလာတယ်။တဖြေးဖြေးနှင့်အမည်ကိုသိလာတယ်။ ရုပ်ကလေးလှသလောက်စွာတယ်။ရည်းစားများတယ်။သူ့အမည်သိတော့ကျနော် fbကနေကျနော်သူ့အမည်ရှာရင်း လှမ်းadd တယ်။သူကလည်းfriendအဖြစ်လက်ခံတယ် Cbမှာစကားလေးဘာလေးပြောရင်းကပိုပြီးရင်းနီးလာတော့တယ်။သူ့အမည်ကတော့ချမ်းမြေ့မေတဲ့…….။
စိ တျ ကှ ယျ ရာ